ချိုမြိန်သောအဆီမြင့်သောအရည်ကိုခဏခဏ ၀ င်ရောက်ခြင်းသည်ကြွက်များကိုအရက်သေစာသောက်သုံးခြင်းပုံစံတွင်စားသုံးရန်လှုံ့ဆော်ပေးမှုနှင့်တိုးမြှင့်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် (Your Brain On Porn)
ချိုမြိန် High-အဆီအရည်သွေးဆောင်မှပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း access ကိုမူးရူးစားသုံးမှု (2013) ၏ကြွက်မော်ဒယ်အတွက်စားသုံးဖို့အာခေါင်နှင့်လှုံ့ဆျောမှုတိုးလာ
Physiol ပြုမူနေ။ စာရေးသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်; PMC 2014 ဧပြီ 10 အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
Physiol Behav ။ 2013 Xပြီ 10; 0: 21-31 ။
2013 မတ်လ 13 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1016 / j.physbeh.2013.03.005
Sylvie Lardeux, ဂျိမ်းဂျေကင်နှင့် Saleem အမ်နီကိုလ*
အရက်အလွန်အကျွံစားသောရောဂါများသည်လျင်မြန်။ အလွန်အကျွံစားသုံးသည့်အစာစားခြင်း၏ထူးခြားသောဖြစ်စဉ်များဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ ကြွက်များတွင်ချိုသောအဆီအစားအစာများကိုချက်ချင်းလက်ငင်းလက်လှမ်းမီခြင်းသည်အရက်သောက်ခြင်း၏ဤရှုထောင့်ကိုတုပသည်။ ဤရွေ့ကားမော်ဒယ်များပုံမှန်အားဖြင့်အစိုင်အခဲအစားအစာ employ; သို့သော်စုစုပေါင်းပမာဏသည်အစိုင်အခဲအစာနှင့်ဆက်နွှယ်ရန်ခက်ခဲသောလှုံ့ဆျောမှု၊ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, lick microstructure ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့် ingestant တစ်အရည်အခါဤ parameters တွေကို dissociate ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြောင်းဖူးဆီ၊ လေးလံသောမုန့်နှင့်သကြားတို့ပါဝင်သောအရည် emulsion ကို အသုံးပြု၍ အရက်သောက်ခြင်းပုံစံကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ကြွက်များအနေဖြင့်ဤအဆီဓာတ်မြင့်မားသော emulsion ကိုခဏခဏ ၀ င်ရောက်သုံးစွဲနိုင်သောကြောင့်ယခင်ကအစိုင်အခဲမြင့်မားသောအဆီများသောအစားအစာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကမူးယစ်ဆေးဝါးကဲ့သို့သောအပြုအမူကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤအပြုအမူ၏အင်္ဂါရပ်တစ်ခုမှာ 2.5 ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းစားသုံးမှုနှုန်းမြင့်တက်လာခြင်းကြောင့်သုံးစွဲမှုတူညီသောအချိန်ဇယားအတိုင်းအဆီနည်းသောအရည်ကိုပေးသောကြွက်များတွင်သိသာခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ Lick microstructure analysis သည်ဤတိုးပွားလာမှုသည်အနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားစားသုံးရန်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အရသာရှိစေရန်မောင်းနှင်ရသောစားသုံးမှုတိုးပွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြသည်။
အရက်အလွန်အကျွံစားသောရောဂါများသည်ပျံ့နှံ့ပြီးရှုပ်ထွေးသောစိတ်ရောဂါရောဂါများဖြစ်သည်။1, 2] ။ ထိရောက်သောကုသနည်းများကိုရှာဖွေခြင်းသည်အာရုံကြောဆိုင်ရာယန္တရားများအကြောင်းပိုမိုနားလည်မှုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဒီအဆုံး, မူးရူးအစားအစာအများအပြားမော်ဒယ်များတီထွင်ခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့သည်အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်သိသိသာသာကွဲပြားသော်လည်းများစွာသောသူတို့အတွက်ဘုံမှာအရသာရှိသောအဆီနှင့် / သို့မဟုတ်ချိုသောအစားအစာများကိုပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြသခြင်းဖြစ်သည်။2-4] ။ ရက်သတ္တပတ်ပေါင်းများစွာကြာအောင် ၀ င်ရောက်နိုင်သည့်ကာလများအတွင်းကြွက်များ၏အာဟာရပြည့်ဝသောအစားအစာများစားသုံးမှုသည်တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာသည်။5-12] လက်လှမ်းမီသည့်နေ့များတွင်ကယ်လိုရီစားသုံးခြင်းသည်တူညီသောကယ်လိုရီသိပ်သည်းသောအစားအစာကိုစဉ်ဆက်မပြတ်သုံးစွဲနိုင်သောကြွက်များ၏ချဉ်းကပ်မှုဖြစ်သည်။7, 8, 10, 13-15] ။ ထို့အပြင်အဆီဓာတ်မြင့်မားသောအစားအစာများကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းရရှိနိုင်လျှင်အခြားအချိန်များတွင်ကြွက်များသည်ကယ်လိုရီနည်းသောအစားအစာများစားသုံးမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။10, 11, 16] ။ ဤပုံစံသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းရောဂါ၏ထူးခြားသောလက္ခဏာများနှင့်ဆင်တူပြီးအရက်သောက်ခြင်း၏လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့်ကိုက်ညီသည် - ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသုံးနိုင်သည့်အချိန်ဇယားမရှိခြင်းသည်အလားတူကာလ၌မဟုတ်လျှင်အလားတူအချိန်ကာလတွင်စားသုံးခြင်းထက်ပိုမိုကြီးမားသောအစာပမာဏကိုစားသုံးခြင်းဖြစ်သည်။3, 4].
အရက်သေစာသောက်သုံးခြင်း၏ကြွက်များသည်လူတို့၏အစာစားခြင်းရောဂါများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်ရှုပ်ထွေးသောလူမှုရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြissuesနာများကိုမဖော်ပြနိုင်သော်လည်း၎င်းတို့သည်စားသုံးမှုကိုထိန်းချုပ်သော ဦး နှောက်ဖြစ်စဉ်များအပေါ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အာရုံကြောဓာတုအပြောင်းအလဲအတော်များများသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာကာလကြာရှည်စွာသောက်သုံးခြင်း (ဆိုလိုသည်မှာရက်သတ္တပတ်များစွာ) အတွက်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။17, 18] ။ ဥပမာ၊ နျူကလိယ accumbens (NAc) တွင်အချိုဓာတ်မြင့်မားခြင်းနှင့်အဆီဓာတ်မြင့်မားစွာပါဝင်သော dopamine ထုတ်လွှတ်မှုရလဒ်များဖြစ်ပေါ်လာသည်။14, 19, 20] dopamine သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး upregulation , D2 dopamine အဲဒီ receptor binding [လျော့နည်းသွားသည်22] နှင့် D1 dopamine receptors ၏တိုးပွားလာစကားရပ်  ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် NAc dopamine သည်အစားအစာရှာဖွေမှုကိုမြှင့်တင်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။23] ဤရလဒ်များကအရက်သောက်ရန်လှုံ့ဆော်မှုသည်မူးယစ်ဆေးဝါးဘာသာရပ်များတွင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်ဟုဖော်ပြသည်။ ထို့အပြင် NAc အတွက်μ opioid receptors ၏ဖော်ပြချက် bingeing တိရိစ္ဆာန်များအတွက်တိုးပွားလာသည်။ အဆိုပါ NAc အတွက် opioidergic neurotransmission ၏အပြုအမူအခန်းကဏ္ consum ကိုလောင်အစားအစာများ၏အာဟာရကိုထိန်းညှိဖို့ဖြစ်လိမ့်မယ် [24, 25] သို့မဟုတ်စိတ်ကျေနပ်မှု၏သက်ရောက်မှုကိုကန့်သတ်ရန် , အရသာရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောစားသုံးမှုနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုများအတွက်တာဝန်ရှိသည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာယန္တရားများပြောင်းလဲခြင်းသည်အရက်သောက်ခြင်းကာလအတွင်းစားသုံးမှုကိုစည်းမျဉ်းများဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်အရက်သောက်ခြင်း၏အခြေခံအပြုအမူနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များကိုထပ်မံနားလည်ရန်အတွက်၎င်းသည်အရက်သောက်ခြင်းအတွက်လှုံ့ဆျောမှု၊
ဒီ dissociation ပြီးမြောက်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ ဥပမာ၊ အတုအယောင်ကျွေးမွေးခြင်း  နှင့် intragastric အာဟာရတင် [28, 29] စိတ်ကျေနပ်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများခွဲထုတ်ရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်; အရသာဓာတ်ပြုခြင်းစမ်းသပ်မှုများသည်အရသာရှိမှုကိုတိုင်းတာသည်။30]; နှင့်တိုးတက်သောအချိုးအစားဇယားကဲ့သို့သော operant လုပ်ငန်းများသည်လှုံ့ဆော်မှုကိုတိုက်ရိုက်တိုင်းတာသည်။31-33] ။ တနည်းအားဖြင့် ၀ င်ရောက်မှုကာလအတွင်းသုံးစွဲမှု၏ယာယီပုံစံကိုအသေးစိတ်တိုင်းတာ။ ရိုးရှင်းသောစမ်းသပ်မှုတစ်ခုတွင်လုပ်ငန်းစဉ်သုံးခုအားထိုးထွင်းသိမြင်စေနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်အစာစားချိန်မှ စ၍ စားသုံးမှုကျဆင်းမှုနှုန်း၊ စားသုံးမှုကိုစတင်ရန်အချိန်ကာလနှင့်စားသုံးမှုကန ဦး စားသုံးမှုနှုန်းတို့မှာသီးခြားလွတ်လပ်မှုအတိုင်းအတာများဖြစ်သည်။34-37] ။ စီးပွားဖြစ်ရရှိနိုင် lickometers consummatory အပြုအမူ၏အတိအကျကို timestamps ရရှိရန်တစ် ဦး စျေးသိပ်မကြီးတဲ့နှင့်အကျိုးရှိစွာနည်းလမ်းများပေးသောကြောင့်ဤ parameters တွေကိုအလွယ်တကူအရည် ingestants များအတွက်တိုင်းတာသည်။ ထို့အပြင်ဤနည်းသည်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အရသာရှိမှုတို့နှင့်ဆက်နွှယ်နေသောကမ်ဘာပေါ်နံပါတ်နှင့်အရှည်တို့ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ခွင့်ပြုသည်။36-38] ။ ထို့ကြောင့် lickometers အတွက်မူးယစ်ဆေးအရည်နှင့်အတူမူးရူးစားကြွက်တွေကိုထောက်ပံ့စမ်းသပ်သူအမြန်စားသုံးမှု၏တိကျသောရှုထောင့်အပေါ်အာရုံကြော circuit ကိုခြယ်လှယ် (ဥပမာ, ဦး နှောက် microinjection) ၏ကွဲပြားခြားနားသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုများအတွက်သက်သေအထောက်အထားများရရှိရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မယ်။
ထို့ကြောင့်, ဒီလေ့လာမှု၏ရည်မှန်းချက်တစ်ခုကယ်လိုရီ - သိပ်သည်းအရည်ကိုအသုံးပြုပြီးပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း access ကိုမူးရူးမော်ဒယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်လေ့လာမှုများသည်အငွေ့ပျံစေရန်အတွက် sucrose solution ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။7, 39, 40], ကျွန်တော်တို့ရဲ့စမ်းသပ်ချက်၏ရေရှည်ရည်မှန်းချက်မူးရူးစားသုံးမှုမှμ opioid receptors ၏အလှူငွေဆနျးစစျဖို့ဖြစ်တယ်, ဤ receptors ဦး စားပေးအဆီ၏ palatability နှင့်စားသုံးမှုကိုထိန်းညှိလိမ့်မည်25] ။ အတိုစားခြင်း၊ အတိုရောခြင်းနှင့်သကြားရောစပ်ခြင်းနှင့်အဆီကြွယ်ဝသောခရိုအပါအ ၀ င်အဆီဓာတ်မြင့်မားသောအစားအစာများကိုမူးယစ်ဆေးဝါးစားသုံးရန်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။5, 10, 11, 13, 16, 41, 42] ။ သို့သော်ယခင်လေ့လာမှုများကအဆီဓာတ်အရည်ကိုပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသုံးနိုင်ခဲ့သည်။35] ငါတို့သိသည့်အတိုင်းချိုမြိန်သောအဆီအရည်ကိုအသုံးပြုထားသောအရက်သောက်ခြင်းပုံစံကိုအသေးစိတ်မဖော်ပြနိုင်ပါ။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Corwin နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များတီထွင်ထားသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပေါ် အခြေခံ၍ ထိုကဲ့သို့သောပုံစံကိုပြသခြင်းဖြစ်သည်။ ကြွက်များကိုတစ်ပတ်လျှင်သုံးရက်ခန့်အစိုင်အခဲအဆီနှင့်သကြားအရောအနှောများအသုံးပြုခွင့်ပေးသည်။16] ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤနည်းစနစ်ကိုပြုပြင်ထားသောအစိုင်အခဲအဆီ / သကြားအရောအနှောအစား lickometer တပ်ဆင်ထားသော Sipper ပြွန်များ၌လေးလံသောမုန့်၊ ပြောင်းဖူးဆီနှင့်သကြား (COS) အရည်များထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ Chow နှင့် COS သုံးစွဲမှုအပြင်ကိုယ်အလေးချိန်တို့ကို COS ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်အသုံးပြုခြင်း (သို့) COS ကိုမသုံးနိုင်သောထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။
ကြွက်များသည်အရည်ကိုစားသုံးရန်နှင့်နီအိုဖီယာကိုကျော်လွှားရန်သင်ယူနေစဉ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းလက်လှမ်းမီအုပ်စုတွင်စားသုံးမှုသည်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ကာလသို့အလျင်အမြန်တိုးပွားလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ခန့်မှန်းခဲ့သည်။ သို့သော်အဆီဓာတ်မြင့်မားစွာစားသုံးမိရန်ကာလကြာရှည်စွာဝင်ရောက်ခြင်းသည်ကန ဦး လေ့လာမှုပြီးဆုံးပြီးနောက်တွင်ရှင်းလင်းစွာဖြစ်ပေါ်သောစားသုံးမှုကိုတိုးပွားစေသည်။5, 6, 10-12] ။ ဤတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာခြင်းသည်လှုံ့ဆော်မှု၊ အရသာခံမှု၊ တိုးမြှင့်စားသုံးမှုအနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမြင့်မားသောလှုံ့ဆျောမှုနှင့်အာဟာရကြောင့်ကြောင်းအယူအဆစမ်းသပ်ဖို့ကျနော်တို့တူညီတဲ့ access ကိုဇယားအောက်မှာမုန့်နှင့်သကြားဓာတ်လျော့နည်းကယ်လိုရီဖြေရှင်းချက်ပေးထားသောထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုနှင့် COS ပေးထားကြွက်များတွင် lick ပုံစံများကိုနှိုင်းယှဉ်။ အုပ်စုနှစ်စုလုံးသည်စားသုံးမှုလျင်မြန်စွာမြင့်တက်လာသည်ကိုပြသခဲ့သော်လည်း COS အုပ်စုသည်7ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းလက်လှမ်းမီကာလများတစ်လျှောက်တွင်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာကြောင်းပြသခဲ့ပြီး၊ တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာမှုသည်အနည်းဆုံးတစိတ်တပိုင်းတိုးမြှင့်မှု၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။ ရလဒ်များအရ high-calorie သောက်သုံးမိခြင်း၏ပြင်းထန်သောစားသုံးမှုသည်မြင့်မားသောလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အရသာရှိစေသည့်မောင်းနှင်မှုကြောင့်ဖြစ်ရသည့်အကြောင်းအရင်းများနှင့်ဤတိုးမြှင့်ခြင်းသည် neophobia ၏ကန ဦး လေ့လာမှုနှင့်လျှော့ချမှုနှင့်ကွဲပြားသောရေရှည်လုပ်ငန်းစဉ်၏ရလဒ်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
144-275 ဂရမ်အလေးချိန်ရှိသောအမျိုးသား Long-Evans ကြွက်များ (n = 300) ကို Harlan မှရရှိပြီးအလင်းသံသရာကိုပိတ်ထားသည့် 12 ဇရှိသော 12 ဇရှိသောအခန်းတစ်ခန်းတွင်နေရာယူထားသည်။ စမ်းသပ်မှုအလင်းအဆင့်စဉ်အတွင်းကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ တိရစ္ဆာန်များသည်စမ်းသပ်မှုများမစတင်မီအနည်းဆုံးတစ်ပတ်တွင်နေ့စဉ်ကိုင်တွယ်လေ့ရှိသည်။ ဤအချိန်အတောအတွင်း Chow စားသုံးမှုနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကိုနေ့စဉ်တိုင်းတာသည်။ စမ်းသပ်မှုမစတင်မီကြွက်သုံးကောင်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာအလေးချိန်ပျမ်းမျှစားသုံးမှုနှင့်ကိုက်ညီသောကြွက်အုပ်စုသုံးစုရှိသည်။ တိရိစ္ဆာန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအားလုံးသည်အမေရိကန်အမျိုးသားဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များအားစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းအတွက်လမ်းညွှန်နှင့်ကိုက်ညီပြီးအဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်းဆေးတက္ကသိုလ်၏တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီမှအတည်ပြုခဲ့သည်။
2.2.1 ။ Operant အခန်းများ
အားလုံးသောအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများကိုစံ Med Associates ၏ operant ခန်းများ (30 x 25 cm) တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အခန်းများကို 28 V အိမ်ဖြူတော်အလင်းဖြင့်မီးထွန်းလိုက်သည်။ စမ်းသပ်မှုအတွင်းအချိန်တိုင်းတွင်အဖြူရောင်ဆူညံသံ (65 dB) ကိုသီးသန့်စပီကာဖြင့်ပြသခဲ့သည်။ ဤသည်နှင့်သေတ္တာတစ်ခုချင်းစီကိုပူးတွဲ melamina ကက်ဘိနက်, အနည်းဆုံးအပြင်ဘက်ဆူညံသံတိရိစ္ဆာန်များအာရုံရောက်စေခဲ့သည်။ Operant ခန်းများတွင် lickometer နှစ်ခုပါရှိသည်။ တစ်ခုမှာအချည်းနှီးဖြစ်ပြီးတစ်ခုမှာ cream-oil-sucrose အရည် emulsion (COS) ဖြင့်ပြည့်နေသည်။ စမ်းသပ်မှုအားလုံးတွင် lickometers ဖြတ်ပြီး photobeams ကို အသုံးပြု၍ 1 msec ၏ယာယီ resolution ဖြင့် licks ၏အချိန်ကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
2.2.2 ။ ကျောက်ကပ်
COS နှင့် CS အတွက်အသုံးပြုသောလေးလံသောမုန့်သည် ၁၅ ဂရမ်လျှင်အဆီ ၅ ဂရမ်၊ ဘိုဟိုက်ဒရိတ် ၁ ဂရမ်နှင့်ပရိုတင်း ၁ ဂရမ်ပါရှိသည်။ COS emulsion ကိုနေ့စဉ်လေးလံသောမုန့်နှင့်ပြောင်းဖူးဆီ ၈၀ ဂရမ် sucrose နှင့်5g ဆိုဒီယမ် stearoyl lactylate (နီယက်ကော်ပိုရေးရှင်း) ကိုပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်နေ့စဉ်ပြင်ဆင်သည်။ ဝါယာကြိုး whisk သုံးပြီးပြင်ဆင် emulsion,> 1 နာရီတည်ငြိမ်ရှိ၏ ၂၄ နာရီအကြာတွင်ရေနှင့်ရေအဆင့်များကိုမြင်သာစွာခွဲခြားနိုင်သည်။ ကယ်လိုရီနည်းသောကယ်လိုရီ -scrose (CS) နည်းသောပျော်ရည်ကိုသီးခြားသတ္တဝါအုပ်စုတွင်အသုံးပြုသည်။ CS ကို ၁၀၀ L လေးလံသောမုန့်ကို ၈၀ ဂရမ် sucrose နှင့်ရောစပ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ COS ၏ကယ်လိုရီပါဝင်မှုသည် ၅.၉၉ kCal / mL ဖြစ်သည်; CS များအတွက်တန်ဖိုး 1 Kcal / mL ရှိ၏ နှင့် chow (PMI LabDiet 15) အတွက် ၃.၀၂ kCal / g ဖြစ်သည်။
2.2.3 ။ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း access ကိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်း
ကြွက်များကိုအုပ်စုသုံးစုခွဲထားသည်cos; n = 46), စဉ်ဆက်မပြတ် access ကိုအုပ်စုတစ်စု (ကို Ccos; = = 36) နှင့် COS (N) ကိုလက်လှမ်းမမီသောထိန်းချုပ်မှုအဖွဲ့cos; = = 38) ။ (ကွဲပြားခြားနားသောအုပ်စုများအပေါ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့ pharmacological စမ်းသပ်ချက်များအတွက်ကြွက်များနောက်ပိုင်းတွင်အသုံးပြုခဲ့ကြသောကြောင့်အသုံးပြုကြွက်အရေအတွက်ကြီးမားသည်။ ဤရလဒ်များကိုဤနေရာတွင်အစီရင်ခံတင်ပြကြသည်မဟုတ်။ )5ရက်သတ္တပတ်အဘို့, ငါcos နှင့် Ccos 90 min အတွက်အုပ်စုများသည် operant ခန်းများ၌ COS ပါသော lickometer ကိုတစ်ပတ်လျှင်သုံးကြိမ် (တနင်္လာနေ့၊ ဗုဒ္ဓဟူးနှင့်သောကြာနေ့; MWF) ရရှိနိုင်သည်။ Ccos အုပ်စုလည်းရှိခဲ့ပါတယ် ကြော်ငြာ libitum သူတို့၏အိမ်အိတ်များ၌အချိန်မရွေး COS ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ Lick timestamps နှင့် COS စားသုံးမှုကို access session များအတွင်းမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်၊ အစားအစာစားသုံးမှုနှင့် (စီအတွက်)cos အိမ်လှောင်အိမ်တွင် COS စားသုံးမှုကိုတနင်္လာနေ့မှသောကြာနေ့တိုင်းမှတ်တမ်းတင်သည်။ ထို့ကြောင့်, 25 တိုင်းတာသည့်5ရက်သတ္တပတ်စမ်းသပ်မှုများအတွက်အစီရင်ခံတင်ပြကြသည် (သင်္ဘောသဖန်းသီး။ 2A, D, B, အီး; 3A, C) ။ တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာတော့ဒီအစီအစဉ်ကိုသုံးပိုင်းခွဲထားတယ်။ access ကို session ပြီးနောက်အပြီးနှင့်မတိုင်မီတစ်ရက်အပေါ် chow စားသုံးမှု၏နှိုင်းယှဉ်မှုများ (သင်္ဘောသဖန်းသီး။ 2C, F; 3B, D ကို) (10 ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်း5နှိုင်းယှဉ်မှုများအတွက်) တစ်ပတ်လျှင်နှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ The Ncos ကြွက်များကိုအခြားအုပ်စုများနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာဝယ်ယူခြင်းနှင့်ကိုလိုနီတစ်ခုတည်းတွင်ပင်ထိန်းသိမ်းထားသော်လည်း COS ကိုလက်လှမ်းမမီခဲ့ကြပါ။ ကြော်ငြာ libitum အိမ်လှောင်အိမ်ထဲမှာအချိန်မရွေး chow နှင့်ရေအသုံးပြုခွင့်။
ကယ်လိုရီစားသုံးမှုနှင့် Chow စားသုံးမှုကိုလက်လှမ်းမီအချိန်ဇယားနှင့်စားသုံးသူကလွှမ်းမိုးခဲ့သည်
COS သို့မဟုတ် CS သို့ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းလုပ်ခြင်းသည်ကိုယ်အလေးချိန်တက်ခြင်းကိုမထိခိုက်ပါ
သီးခြားစမ်းသပ်မှုတစ်ခုက COS အစားကယ်လိုရီနည်းသော CS ဖြေရှင်းချက်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကြောင်အုပ်စုသုံးစု (n = 8 တစ်ခုချင်းစီ) ကိုဤစမ်းသပ်မှုတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်CS, C,CS နဲ့ NCSနှင့်ဤငါအတိအကျကုသခံခဲ့ရသည်cos, C,cos နဲ့ Ncos CS ကို COS ။ အစားထိုးခဲ့သည်မှလွဲ။ အသီးသီး, အထက်ဖော်ပြထားတဲ့အုပ်စုများcos နဲ့ NCS အုပ်စုများကိုတူညီစွာဆက်ဆံခဲ့သည် (COS (သို့) CS သို့လက်လှမ်းမမီ)၊ ခြားနားချက်က N ဖြစ်သည်cos အုပ်စုနှင့် I နှင့်အတူတစ်ပြိုင်တည်းကိုလိုနီ၌ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်cos နှင့် Ccos အုပ်စုများ, အ N ကိုသော်လည်းCS အုပ်စုသည်ငါနှင့်အတူတစ်ပြိုင်နက်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်CS နှင့် CCS အုပ်စုများ။
2.3 ။ ဒေတာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
2.3.1 ။ စာရင်းအင်း
မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ထိန်းချုပ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှိုင်းယှဉ်ဖို့တစ်အချက် (ရက်) သို့မဟုတ်နှစ်ခုအချက်များ (ရက်နှင့်အုပ်စုတစ်စု) နှင့်အတူထပ်ခါတလဲလဲ - တိုင်းတာ ANOVA ခဲ့ကြသည်။ ANOVA များကိုနောက်မှ Holm-Sidak ကလိုက်သည် post ကို hoc စမ်းသပ်မှုများ၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခု p <0.05 သိသိသာသာခြားနားချက်စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ ANOVA ရလဒ်များကိုတင်ပြသည် စားပွဲတင် 1။ အဆက်မပြတ် access လုပ်သည့်သုံးစွဲမှုများပြားလာခြင်းရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်ရန်2မှယနေ့ 8 မှဒေတာများသည်အနည်းဆုံးနှစ်ထပ်ကိန်းကိုဆုတ်ပေးသော linear model တွင်တပ်ဆင်ခဲ့သည်။ ဤသည်နေ့ရက်ကာလကိုဖြတ်ပြီးဆင်ခြေလျှော0ကနေသိသိသာသာခြားနားချက်အဘို့အအကဲဖြတ်ခဲ့သည်နှင့်တောင်စောင်းငါအကြားနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်cos ငါCS ANCOVA ကိုအသုံးပြု။ အုပ်စုများ။ အားလုံးဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း R ကို software ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုအသုံးပြု။ ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည် .
2.3.2 ။ microstructure ကိုလျက်
လျက်နှုန်း တစ်စက္ကန့်ကိုလျက်၏နံပါတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ ကန ဦး တွန့်ကုတ်နှုန်းကိုအစည်းအဝေး၏ပထမ ဦး ဆုံးပေါက်ကွဲခြင်း၏ပထမအကြိမ်ပြုခြင်းဖြင့်မိနစ်အစပိုင်းတွင်လျက်သည့်နှုန်းကိုသတ်မှတ်သည်။35-37, 44], နှင့်ပထမ ဦး ဆုံးအလျက်ဖို့အောင်းနေချိန် session ကိုစတင်ကနေဒီကိုလျက်ရန်အချိန်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ ပေါက်ကွဲမှု ILI> 1 s မှခွဲခြားထားသော licks အုပ်စုများအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည် (ဆိုလိုသည်မှာပေါက်ကွဲမှု၏အဆုံးသတ်ခြင်းကို ILI> 1 s စတင်ခြင်းဖြင့်သတ်မှတ်သည်) ။ ပေါက်ကွဲမှုကြာချိန် နှင့် ကွဲအရွယ်အစား တစ် ဦး ပေါကျကှဲအားဖြင့် spanned အချိန်နှင့်အသီးသီးသောအပေါကျကှဲအတွက်လျက်၏နံပါတ်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ သုံးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုလျက်၏ပေါက်ကွဲမှုသာထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ကြသည်။ စားသုံးမှုအများစုသည်အစည်းအဝေး၏အစသို့ ဦး တည်လာသည်နှင့်အမျှ microstructure analysis သည် session တစ်ခုလုံးအတွက်သာမကအဆင့်နှစ်ဆင့်အတွက်ပါသီးခြားပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ) နှင့် session (နောက်ဆုံး 22.5 ရပ်ကွက်) ၏အဆုံး။
3.1 ။ ယေဘုယျစားသုံးမှုနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်
ငါအတွက်ကြွက်cos စမ်းသပ်ကာလများ၌ရေ (5% v / v)၊ သကြား (50% w / v) အရည် emulsion (COS) ကို (COS သို့ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းရယူသုံးစွဲနိုင်သော) အုပ်စုသည် 50 ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းခရင်မ် (8% v / v)၊ ၊ ဗုဒ္ဓဟူးနှင့်သောကြာများ (နှင့်အခြားအချိန်များတွင် COS ကိုမသုံးနိုင်ခြင်း) ။ COS သည် operant ခန်းများရှိ ၀ င်မီတာမှတဆင့် 90 တွင်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းအသုံးပြုသည်။5ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြားဖြတ်ဆက်သွယ်မှုတွင်သုံးစွဲသော COS ပမာဏသည်ပုံမှန်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ 15 အဆုံးတွင် (5 အဆုံးတွင်)th ရက်သတ္တပတ်တစ်ပတ်), သုံးစွဲသောပမာဏ 1 မှ 10 ရက်များထက်သိသိသာသာပိုမိုများပြားပြီးရက်ပေါင်း6မှ 15 သို့သုံးစွဲသောပမာဏသည်ရက်များ 1,2သို့မဟုတ်3ထက်များစွာပိုသည် (သင်္ဘောသဖန်း။ 1A) ။ ငါနှင့်မတူဘဲcos အုပ်စု C ကိုအတွက်ကြွက်cos အုပ်စု (COS ကိုအဆက်မပြတ်ဝင်ရောက်ခြင်း) သည် COS ကို 90 min access period အတွင်း၌သာမကအခြားအိမ်များရှိအိမ်လှောင်အိမ်များတွင်ပါဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း Ccos အုပ်စုသည်ငါထက်ဝေးလျော့နည်း COS ကိုလောင်လေ၏cos ပထမအပြီးတွင်အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် operant အခန်းများရှိအုပ်စုသည်၊ 15 လက်လှမ်းမီရက်များအတွင်းစားသုံးမှုကွာခြားမှုမရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။သင်္ဘောသဖန်း။ 1A).
COS, ဒါပေမယ့်ဆက်တိုက်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း access ကိုအစည်းအဝေးများတလျှောက် CS စားသုံးမှုတိုးတက်လာခဲ့သည်
ငါ၌လေ့လာတွေ့ရှိသက်ရောက်မှုမှမတူဘဲcos အုပ်စု, စားသုံးပမာဏ I ကိုများအတွက်ရက်သတ္တပတ်တစ်လျှောက်လုံးသိသိသာသာတိုးမြှင့်မပေးခဲ့ပါဘူးCS CS, နိမ့်အဆီမုန့် / သကြားဖြေရှင်းချက်မှဝင်ရောက်ခွင့်ခဲ့သောအုပ်စု။ ဤကြွက်များသည်ပထမ ၀ င်ရောက်မှုအစီအစဉ်တွင်စားသုံးမှုနိမ့်ကျမှုကိုပြသခဲ့သည်။ နောက်ဆက်တွဲအစီအစဉ်များတွင်စားသုံးမှုသည်ပိုမိုများသော်လည်း (C သည်အခန်းတွင်းစားသုံးမှုထက်များသောအားဖြင့်ပိုမိုများပြားသည်)CS အုပ်စုတစ်စု) ရက်ပေါင်းများစွာထပ်မံတိုးပွားလာသည်မဟုတ်သင်္ဘောသဖန်း။ 1B) ။ I တွင်ရက်များ၏ကိန်းဂဏန်းအရသိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုမရှိခြင်းCS အုပ်စုအတွင်း၌ I ၏သက်ရောက်မှုများနှင့်ခြားနားသည်cos အုပ်စုတစု (စားပွဲတင် 1); သို့သော်ဤခြားနားချက်သည်သီအိုရီအရ I တွင်ရှိသောဘာသာရပ်များ၏သေးငယ်သည့်အရေအတွက် (နှင့်စာရင်းအင်းစွမ်းအား) မှပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည်CS အုပ်စု။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကငါချိုးဖဲ့cos ငါမှနှိုင်းယှဉ်အရွယ်အစား၏6ခွဲအုပ်စုများသို့အုပ်စုတစ်စုCS အုပ်စု (8 ငါများအတွက် N ကို = 5cos အုပ်စုငယ်တစ်ခု၊ အုပ်စုခွဲတစ်ခုအတွက် N = 6; အုပ်စုငယ်တစ်ခုစီမှဘာသာရပ်များကိုအတူတကွလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသည်။5I ၏6တွင် COS သုံးစွဲမှုသိသိသာသာတိုးလာခဲ့သည်cos အုပ်စုများ (ရက်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု: အုပ်စုတစ်စု 1: F(14,211) = 5.87, P ကို ​​<0.001; အုပ်စု ၂: F(14,210) = 4.06, p <0.001; အုပ်စု ၃: F(14,200) = 4.83, p <0.001; အုပ်စု ၃: F(14,196) = 7.98, p <0.001; အုပ်စု ၅: F(14,74) = 1.87, p <0.05); ကျန်အုပ်စုငယ်များတွင်အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အရေးပါမှုသို့ချဉ်းကပ်သည် (F)(14,141) = 1.72, p = 0.058) ။ ငါCS အုပ်စုတစ်စု, သို့သော်, သိသာထင်ရှားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုဆီသို့ ဦး တည်လမ်းကြောင်းသစ်ပင်သက်သေအထောက်အထားမရှိ (p = 0.56; စားပွဲတင် 1) ။ ထို့ကြောင့်, ငါအတွက်ရက်ပေါင်း၏သိသာထင်ရှားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများမရှိခြင်းCS ကြွက်များစာရင်းအင်းပါဝါမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။
ဤရလဒ်သည်ငါကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်CS ကြွက်များသည် CS ကိုစားသုံးရန်နှင့်တစ်နာရီအတွင်း neophobia ကိုကျော်လွှားရန်သင်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးရလဒ်မှာဒုတိယစားသုံးသူများအနေဖြင့်ကုန်းပြင်မြင့်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကန ဦး လေ့လာသင်ယူခြင်းနှင့်နီအိုဂျက်တိုက်ဖျက်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများသည် I အတွက်အလားတူဖြစ်သင့်သည်cos ငါCS အုပ်စုများ, ငါအတွက်စားသုံးမှုအတွက်ကြီးမားသောတိုးcos 1 မှယနေ့2သို့အုပ်စုလိုက် (သင်္ဘောသဖန်း။ 1A) ကန ဦး လေ့လာသင်ယူခြင်းနှင့် neophobia လျှော့ချခြင်းကြောင့်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ သို့သော်နောက်ဆက်တွဲနေ့များတွင်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာခြင်းသည်ဤလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်မကိုက်ညီပါ။ ထို့ကြောင့်, စားသုံးမှုအတွက်တဖြည်းဖြည်းတိုးခွဲထုတ်ရန် (သင်္ဘောသဖန်း။ 1A) နှင့်အခြား consummatory အစီအမံ (သင်္ဘောသဖန်းသီး။5နှင့် and6) 6) ကန ဦး လေ့လာသင်ယူခြင်းနှင့်နီဖော့ဘီးယားသက်ရောက်မှုများမှကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ရက်ချင်းစီတွင်စားသုံးမှုကို2နှင့်3ရက်များ၏အခြေခံစားသုံးမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်။
COS သို့ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းလက်လှမ်းမီသည့်နေ့ရက်များအတွင်းတွင်လျက်လျက်နေရန်နှင့်ကန ဦး အသားကျမှုနှုန်းပြောင်းလဲသွားသည်
ကွဲအက်သော microstructure သည် CSS ကိုလက်လှမ်းမီသည့်နေ့များတစ်လျှောက်ပြောင်းလဲသွားသော်လည်း CS မဟုတ်ပါ
ငါအတွက်အစောပိုင်းကုန်းအကျိုးသက်ရောက်မှုCS အုပ်စုသည် I တွင်တွေ့ရှိရသည့်တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာခြင်းနှင့်သိသိသာသာကွဲပြားနေသည်cos နေ့က 8 အားဖြင့်ကုန်းသို့ရောက်ရှိသောအုပ်စု။ I ပထမနေ့ပြီးနောက်စားသုံးမှုတိုးနှုန်းကိုတိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်ရန်cos ငါCS အုပ်စုများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်2မှတစ်ရက် 8 သို့တိုးမြှင့်ခြင်း၏ slope ကိုတွက်ချက်သည်။သင်္ဘောသဖန်း။ 1C) ။ လျှောစောက်အပြုသဘောနှင့်ငါများအတွက်0ထံမှသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသွားသော်လည်းcos အုပ်စုအတွက်၎င်းသည်ငါအတွက်0နှင့်သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားခြင်းမရှိပါCS အုပ်စု။ ထို့အပြင်5I ၏6တွင်သိသိသာသာအပြုသဘောဆင်ခြေလျှောကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်cos အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအုပ်စုငယ်များ (မပြပါ) ။ ထို့အပြင်ငါအတွက်တောင်စောင်း၏နှိုင်းယှဉ်cos ငါCS ANCOVA ကိုသုံးသောအုပ်စုများသည်အုပ်စုနှစ်ခုအကြားသိသိသာသာခြားနားကြောင်းပြသခဲ့သည် (သင်္ဘောသဖန်း။ 1C) ။ ထို့ကြောင့်ငါcos အုပ်စုသည်အုပ်စုသည်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းလက်လှမ်းမီကာလများအတွင်းစားသုံးမှုနှုန်းတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာခြင်းကိုသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကန ဦး လေ့လာသင်ယူခြင်း (သို့မဟုတ်) နီဖော့ဂျက်နီများကိုလျော့နည်းစေခြင်း၏အကျိုးဆက်အဖြစ်အလွယ်တကူမရှင်းပြနိုင်ပါ။ ဒီတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာမှုကအစိုင်အခဲအဆီမြင့်မားသောအစာကိုခဏခဏဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသောကြွက်များတွင်ယခင်ကတွေ့ရှိခဲ့သောပမာဏနှင့်ဆင်တူသည်။5, 6, 10-12].
I အတွင်းသုံးစွဲမှုတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာမှုအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအခြားရွေးချယ်စရာရှင်းပြချက်တစ်ခုcos အုပ်စုသည်ကြွက်များသည်တစ်ချိန်တည်းတွင် COS ပိုမိုရရှိရန်သင်ယူခဲ့ကြသည်။ ဒီအယူအဆကိုစမ်းသပ်ဖို့, ငါငါဖြတ်ပြီးစားသုံးအရည်တစ် ml နှုန်း licks ၏နံပါတ်နှိုင်းယှဉ်cos ငါCS အုပ်စုနှစ်ခုနှင့် Access နေ့တစ်လျှောက်, နှစ်ခုအချက် ANOVA သုံးပြီး။ ငါcos အုပ်စုသည်ငါထက်ပိုမိုထိရောက်စွာလျက်CS အုပ်စု (စုစုပေါင်းပျမ်းမျှအား 15 အစည်းအဝေးများတွင်: COS: 315.0 ± 52.3 licks / mL; CS: 418.3 ± 106.4 licks / mL; F)(1,719) = 13.6; p <0.001) နှင့်ဝင်ရောက်ခွင့်ရက်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည် (F(14,719) = 1.8; p = 0.04), ဒါပေမယ့်အဘယ်သူမျှမအပြန်အလှန် (F(14,719) = 0.5; p = 0.9) ။ Post-hoc စမ်းသပ်မှုများအရရက်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ပထမနေ့မှဒုတိယအကြိမ်အထိထိရောက်စွာတိုးမြှင့်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော်လည်းနောက်ပိုင်းအစည်းအဝေးများတွင်ထပ်မံတိုးမြှင့်ခြင်းမရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် I တွင်သုံးစွဲမှုတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာသည်cos အုပ်စုတစ်စုကိုထိရောက်မှုအတွက်အပြောင်းအလဲများမှစွပ်စွဲမရနိုင်ပါ။
ရှုပ်ထွေးစေနိုင်သောနောက်အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာ COS တွင် emulsifier (sodium stearoyl lactylate) ရှိခြင်းဖြစ်သော်လည်း CS: the Icos emulsifier ၏တည်ရှိမှုကြောင့်ကြွက်များအစကန ဦး COS ကိုရှောင်ရှားခဲ့ကြပေမည်။ COS ကို emulsifier မပါဘဲလုပ်ရန်မဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် CS နှင့် CS + 0.1% ဆိုဒီယမ် stearoyl lactylate (အလေးချိန် / အသံအတိုးအကျယ်) ၏စားသုံးမှုကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့် COS ကိုပြင်ဆင်ရာတွင်အသုံးပြုသော emulsifier ကိုကြွက်များကရှောင်ရှားသည်ဟူသောယူဆချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ကြွက်ခြောက်ကောင်ကိုအိမ်လှောင်အိမ်ထဲ၌ ၁ နာရီတစ်ကြိမ်အရည်နှစ်လုံးပါသည့်ပုလင်းများနှင့်တစ်ပြိုင်တည်းတင်ပြခဲ့သည်။ တစ်ရက်လေ့ပြီးနောက်ဤအတွေ့အကြုံကိုနှစ်ကြိမ်ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဘေးထွက်ဘက်လိုက်မှုမှရှောင်ရှားရန်ဆွေမျိုးပုလင်းအနေအထားကိုရက်အကြားပြောင်းလဲခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးလေ့လာမှုနှစ်ခုတွင်ကြွက်များသည် CS (1 ± 4.2 ml) နှင့် CS + emulsifier (0.8 ± 5.4 ml; t-test p> 0.4) ပမာဏတူတူသောက်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ကြွက်များသည် emulsifier ကိုရှောင်ကြဉ်သည်။
5 ရက်သတ္တပတ်များအတွင်း၊cos နှင့် Ccos အိမ်လှောင်အိမ်များတွင်အုပ်စုများသည်တဖြည်းဖြည်းလျော့နည်း။ မရရှိနိုင်ပါ။ Ccos အုပ်စုသည်အနည်းငယ်မျှသာစားသုံးသည် (သင်္ဘောသဖန်း။ 2A) သို့သော် COS အမြောက်အမြားစားသုံးမှုကြောင့် N ထက်တစ်နေ့လျှင်ကယ်လိုရီပိုမိုများပြားစွာစားသုံးခဲ့သည်cos COS ကိုလက်လှမ်းမမီသောထိန်းချုပ်မှုအဖွဲ့ (သင်္ဘောသဖန်း။ 2B) ။ ငါcos အုပ်စုသည် Chow စားသုံးမှုတွင်ပုံမှန်နှင့်ပုံမှန်ပြောင်းလဲမှုများကိုပြသခဲ့သည် (သင်္ဘောသဖန်း။ 2A) ဤအုပ်စုရှိကြွက်များသည် COS ကိုမသုံးမီတစ်ရက်သည်ပိုများလာပြီး 24 နာရီတွင် COS လက်လှမ်းမီပြီးနောက်သင်္ဘောသဖန်း။ 2C) ။ ဆနျ့ကငျြ, အ N ကိုမcos C ကိုမပါcos အသုံးပြုမှုကာလမတိုင်မီနှင့်အပြီးအုပ်စုများသည်၎င်းတို့၏ Chow စားသုံးမှုနှင့်ကွဲပြားသည် (သင်္ဘောသဖန်း။ 2C) ။ ငါအတွက်cos ကြွက်များအနေဖြင့် COS လက်လှမ်းမီသောနေ့များတွင်ဤအုပ်စုသည် C သုံးစွဲသောပမာဏနှင့်တူသောစုစုပေါင်းကယ်လိုရီကိုစားသုံးခဲ့သည်။cos အုပ်စုနှင့် COS မပါဘဲရက်, ငါcos အုပ်စုသည် N ထက်အနည်းငယ်လျော့နည်းသည်cos အုပ်စု။ ငါစားသုံးကယ်လိုရီ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်cos လက်လှမ်းမီသောနေ့ရက်များတွင်အုပ်စုသည် COS ကိုသောက်သုံးမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။5ရက်သတ္တပတ်အကုန်တွင် Icos အုပ်စုသည် CN ထက်ဝက်ကျော်ထက်အနည်းငယ်ပိုသော 90 min တွင်စားသုံးသည်cos အုပ်စုတစ်ခုလုံး (access ကိုနေ့က 15 အပေါ်: ငါတနေ့လုံးအတွက်ကိုလောင်လေ၏cos: COS ၏ 54.2 ± 4.0 kCal လောင်; ဂcos: COS ၏ 97.7 ± 5.7 kCal) ကိုလောင်လေ၏။ ဤဆိုးကျိုးများသည် I အတွင်းရက်ပေါင်းများစွာစုစုပေါင်းကယ်လိုရီစားသုံးမှု၏“ လွှသွား” ပုံစံကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်cos အုပ်စုတစု (သင်္ဘောသဖန်း။ 2B) ။ အဆုံးစွန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလည်းတွေ့မြင်နိုင်ပါသည် သင်္ဘောသဖန်း။ 2C (ငါcos မူးယစ်ဆေးဝါးရက်မတိုင်မီအုပ်စု၏ chow စားသုံးမှုသည် N ထက်လျော့နည်းသည်cos အုပ်စု) ။ ဤရလဒ်သည်အရက်အလွန်အကျွံစားသောအပြုအမူ၏ကြွက်မော်ဒယ်အဖြစ်အစိုင်အခဲအဆီမြင့်အစားအစာမှပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း access ကိုအသုံးပြု။ အခြားသူများရဲ့တွေ့ရှိချက်များနှင့်ကိုက်ညီ5, 10, 11, 16, 41, 42].
အရေးကြီးသည်မှာဒီအစာကျွေးခြင်းပုံစံကို I တွင်မတွေ့ရှိခဲ့ပါCS COS emulsion အစားအနိမ့်အဆီမုန့် / သကြားဓာတ်ပါဝင်မှုကိုရရှိသောကြွက်များ၊ ကြွက်များတွင် CS access session တစ်ခုရှိ၊သင်္ဘောသဖန်း။ 2D, F ကို) ။ ထို့အပြင်ငါ၌တွေ့မြင် "သွားမြင်ခြင်း" ပုံစံကိုငါသိသိသာသာလျော့နည်းခဲ့သည်CS ငါထက်ကြွက်cos ကြွက်များ (နှိုင်းယှဉ်ပါ သင်္ဘောသဖန်း။ 2E နှင့် သင်္ဘောသဖန်း။ 2B) ။ ထို့ကြောင့် COS ကိုပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းရယူသုံးစွဲခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးကဲ့သို့သောစားသုံးမှုပုံစံကို CS နှင့်ပြတ်တောက်သွားသည်။
အုပ်စုအားလုံး၏ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်သည်5ရက်သတ္တပတ်များအတွင်း C တိုးပွားလာသည်cos အုပ်စု၏အလေးချိန်သည်အခြားအုပ်စုများထက်ပိုမိုလျှင်မြန်သည် (သင်္ဘောသဖန်း။ 3A) ။ သိသာထင်ရှားတဲ့, COS3ရက်သတ္တပတ် / ရက်သတ္တပတ်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိနေသော်လည်းငါcos အုပ်စုသည် N ထက်ပိုမိုအလေးချိန်မရခဲ့ပေcos အုပ်စုတစု (သင်္ဘောသဖန်း။ 3A) ။ ငါcos ကြွက်များ၏ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကိုပုံမှန်ပုံမှန်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်မှုသည် COS စားသုံးပြီးနောက်စားသုံးမှုလျှော့ချခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်သည်။သင်္ဘောသဖန်း။ 2C): COS လက်လှမ်းမီမှီတစ်နေ့တာတွင်သူတို့၏ကိုယ်အလေးချိန်သည်ဝင်ရောက်ခွင့်ရပြီးနောက်တစ်ရက်တွင်သိသိသာသာပိုမိုများပြားသည် (သင်္ဘောသဖန်း။ 3B) ။ ဆနျ့ကငျြ, Ccos နဲ့ Ncos အုပ်စုများသည်ပုံမှန်နှုန်းဖြင့်ကိုယ်အလေးချိန်တက်သည် (သင်္ဘောသဖန်း။ 3B) ။ အလားတူပင်, C / C ဖြေရှင်းချက်နှင့်အတူ CCS အုပ်စု၏အလေးချိန်သည် I ထက်ပိုမိုလျှင်မြန်သည်CS နဲ့ NCS အုပ်စုများ (သင်္ဘောသဖန်း။ 3C, D ကို) ။ ဤရလဒ်သည်အစိုင်အခဲများသောအဆီများသောအစားအစာနှင့်ကြိုတင်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။10, 11, 41] ။ သူတို့ကမကြာခဏလူ့မူးရူးအစားအစာရောဂါများဖြစ်သကဲ့သို့ [ညွှန်ပြ]45, 46], အရက်သောက်ကြွက်5ရက်သတ္တပတ်တစ်လျှောက်လုံးထိုကဲ့သို့သောအစားအစာမှအကြိမ်ကြိမ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း access ကိုပြီးနောက်ပင်အလွန်အမင်းကယ်လိုရီအစားအစာများကိုစားသုံးပြီးနောက်၎င်းတို့၏စားသုံးမှုကိုကန့်သတ်နိုင်ကြသည်။
3.2 ။ စားသုံးမှုအတွင်း - session တစ်ခုအချိန်သင်တန်း
အလွန်အာဟာရရှိသောအရည်ကိုလက်လှမ်းမီသောအခါကြွက်များ၏စားသုံးမှုအားအစာရေစာစားသုံးခြင်းသည်အာဟာရဓာတ် (နှင့်၎င်းနှင့်ဆက်နွယ်နေသောအရသာလှုံ့ဆော်မှု) သည်စိတ်ရှုပ်စေသောယန္တရားများကိုသက်ဝင်စေသည်။34] ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် COS စားသုံးမှုသည်အလားတူပုံစံနှင့်မတူကိုမေးမြန်းခဲ့သည်။ 90 min session (5 min bins တွင်) ကိုလျက်ရန်အချိန်ကာလလမ်းကြောင်း၏ကွက်လပ်များတွင်ပြထားသကဲ့သို့ Icos အုပ်စုသည်အပတ်စဉ် 20 နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကရက်သတ္တပတ်5အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ် 1 မိနစ်တွင်အထင်အမြင်မြင့်တက်မှုကိုဖော်ပြသည်။သင်္ဘောသဖန်း။ 4A, B,) ။ ငါcos ကြွက်များအစာကျွေးခြင်းနှုန်းသည်အစည်းအဝေးစတင်အပြီးတွင်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 30 မိနစ်ခန့်အကြာတွင်ကြိုကြားကြိုကြားကြိုကြားအဆင့်သို့ပြန်သွားသည် (သင်္ဘောသဖန်း။ 4A, B,) ယခင်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များနှင့်ကိုက်ညီ  ။ အသုံးပြုမှုအပိုင်း၏အစပိုင်းနှင့်နောက်ပိုင်းအပိုင်းများ၌အလွန်တရာကွဲပြားခြားနားသောကြောင့်နောက်ဆက်တွဲ lick ပုံစံတွင်ပထမအပိုင်း (22.5 min) နှင့်နောက်ဆုံးသုံးလပတ် (68.5 min) တွင်သီးခြားစားသုံးမှုကိုကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်သည်။
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဝင်ရောက်ခြင်းများကြောင့် COS သုံးစွဲမှုတိုးလာခြင်းသည်အစည်းအဝေး၏ပထမသုံးလပတ်အတွင်းဖြစ်သည်
မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း၊ အစည်းအဝေး၏ပထမသုံးလပတ်တွင်စားသုံးမှုနှုန်းတိုးလာခြင်းသည်စီဒီတွင် ပို၍ သေးငယ်သည်cos အုပ်စုတစု (သင်္ဘောသဖန်း။ 4B) ။ အမှန်မှာ C သည်အံ့သြဖွယ်ရာဖြစ်သည်cos COS သည်သူတို့၏အိမ်လှောင်အိမ်များတွင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရရှိနိုင်သည့်အတွက်ကြွက်များသည် lickometer ခန်းများ၌ COS များစွာသောက်သုံးခဲ့ကြသည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုမှာ COS အသစ်သည်အိမ်လှောင်အိမ်ရှိ COS ထက် ၂၄ နာရီအသက်ပိုကြီးသော COS ထက် ပို၍ စားသုံးမိခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်အိမ်တွင်းလှောင်အိမ်တွင် ၁ နာရီ ၂ ပုလင်းရွေးချယ်မှုစမ်းသပ်ချက်တွင်လတ်ဆတ်သော COS နှင့်နေ့သက် COS ကိုပေးသောကြွက် ၆ ကောင်သည်အိမ်လှောင်အိမ်အတွင်းရှိလတ်ဆတ်သော COS ကိုမနှစ်သက်ကြောင်းပြသခဲ့သည် (COS လတ်ဆတ်သော - 24 ±6mL; နေ့ဟောင်း COS - ၆.၀ ± ၁.၈) ; t-test p> 1) ။ ထို့ကြောင့် C တွင် COS ၏ကန ဦး စားသုံးမှုတိုးလာသည်cos အုပ်စု (အိမ်လှောင်အိမ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ) lickometer အခန်းထဲသို့အတော်လေးဝတ္ထုသို့နေရာချထားအောက်ပါအပြုအမူ activation တစ် function ကိုဖြစ်နိုင်သည်။
3.3 ။ ပထမ ဦး ဆုံးလျက်နေရန်အကန့်အသတ်နှင့်ကန ဦး ကလျက်နှုန်း
COS သို့ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဝင်ရောက်ခြင်းကြောင့်စားသုံးမှုတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာခြင်း (သဖန်းသီး။ 1) တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်စားသုံးရန်နှင့် / သို့မဟုတ်အရသာရှိစေရန်မောင်းနှင်သည့်စားသုံးမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤအယူအဆများကိုစမ်းသပ်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ပြုခြင်း (လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုအညွှန်းကိန်း) နှင့်ကန ဦး တွန့်လိမ်မှုနှုန်း (အာနိသင်ရှိမှုကြောင့်မောင်းနှင်သောစားသုံးမှုကိုထင်ဟပ်ရန်) ကိုကြာမြင့်စွာစစ်ဆေးခဲ့သည်။35-37] ။ အဆက်မပြတ် access ကိုကျော်, ငါcos အုပ်စု၏ COS စားသုံးမှုကိုစတင်ရန်အရှိန်အဟုန်မှာ C နှင့် C တိုလာသည်cos အုပ်စု၏ကြာချိန်ကမပြောင်းလဲသင်္ဘောသဖန်း။ 5A) ။ ထို့အပွငျပထမ ဦး ဆုံးလျက်ရန်အောင်းနေချိန်ကို C အတွက်တသမတ်တည်းသိသိသာသာကြာကြာဖြစ်ခဲ့သည်cos ငါထက်အုပ်စုတစ်စုcos အုပ်စုတစု (သင်္ဘောသဖန်း။ 5A), တစ် ဦး မျက်နှာသာအစားအစာမှစဉ်ဆက်မပြတ်နှင့်ကန့်သတ်လက်လှမ်းပေးထားတိရိစ္ဆာန်များအကြားမျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်ဟုလှုံ့ဆျောမှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုနှင့်ကိုက်ညီ။ အထူးသဖြင့်, ငါနှစ် ဦး စလုံးအတွက်အစည်းအဝေးများအနှံ့ကန ဦး lick နှုန်းကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်cos နှင့် Ccos ကြွက်များနှင့်ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်နေ့တာအတွင်းအုပ်စုများအကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားဘူး (သင်္ဘောသဖန်း။ 5C) ။ ထို့ကြောင့်လှုံ့ဆျောမှုအတိုင်းအတာနှင့်မတူသည်မှာအုပ်စုနှစ်စုတွင်အာဟာရပြည့်ဝစေသောစားသုံးမှုအတိုင်းအတာတိုးပွားလာသည်။
မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း I တွင်စားသုံးမှုပိုမိုမြင့်မားမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်CS အုပ်စုတစ်စုမCS C ကိုမပါCS အုပ်စုများသည်ပထမအကြိမ်အောင်းနေမှုကိုသိသိသာသာလျော့နည်းစေသည်။သင်္ဘောသဖန်း။ 5B) သို့မဟုတ်ကန ဦး လျက်နှုန်းတိုးလာခြင်း (သင်္ဘောသဖန်း။ 5D) ။ အချုပ်အားဖြင့် COS (သို့သော် CS မဟုတ်ပါ) အားပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဝင်ရောက်ခြင်းကြောင့် COS သုံးစွဲမှုတိုးပွားလာခြင်းနှင့်အတူလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အရသာခံနိုင်မှုများသိသာစွာတိုးပွားလာခဲ့သည်။
3.4 ။ နံပါတ်နှင့်အရှည်ကွဲ
~7Hz နှုန်းပုံစံဖြင့်ကြွက်များကိုလျက်။ အစာစားနေစဉ်အစာစားနှုန်းအလွန်များသောအားဖြင့်> 1 စက္ကန့် [pauses] များကဖြတ်တောက်သည်။36, 37] ။ ၁၅ ဆယ့်ငါးရက်မြောက်သောနေ့ရက် မှနေ၍ I အတွက်အတွင်းပေါက်ကွဲမှုနှုန်းမှာလျက်နေသည်cos အုပ်စုသည်တည်ငြိမ်နေဆဲ (၆.၇ ± ၀.၂ - ၆.၉ - ၀.၁ Hz၊ p> ၀.၅၅) တည်ငြိမ်နေဆဲဖြစ်သည်။သင်္ဘောသဖန်း။ 1A) အတွင်း - ပေါကျကှဲနှုန်းကိုထိန်းချုပ်သောဗဟိုပုံစံမီးစက်တစ်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်မဟုတ်ခဲ့ပေ။
အရသာရှိသောအရည်ကိုလက်လှမ်းမီချိန်တွင်ပေါက်ကွဲမှုအရေအတွက်ကိုစားသုံးရန်လှုံ့ဆော်မှုကလွှမ်းမိုးသည်။ ကွဲလွင့်မှုကြာချိန်ကိုအရည်၏အာဟာရရရှိမှုက ပို၍ ပြင်းထန်စွာလွှမ်းမိုးသည်။36, 37] ။ ဒီအယူအဆ, C နဲ့ကိုက်ညီcos ကြွက်ယေဘုယျအားဖြင့်ငါထက်နိမ့်ပေါကျကှဲနံပါတ်များကိုပြcos ကြွက် (သင်္ဘောသဖန်း။ 6A, C) ။ ငါcos အုပ်စုသည်အစုလိုက်အပြုံလိုက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည် access session အတွင်းရှိအချိန်အပေါ်အလွန်အမင်းမှီခိုနေရသည်။ ပထမသုံးလပတ်တွင်5ဆက်သွယ်မှုရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်း ၀ င်လာသည့်အရေအတွက်သည်လွန်ခဲ့သည့်သုံးလပတ်တွင်လျော့နည်းသွားသော်လည်း၊သင်္ဘောသဖန်း။ 6A, C) ။ ဆနျ့ကငျြ, ငါCS ကြွက်များသည်သူတို့၏စားသုံးမှုကိုမတိုးပွားစေနိုင်သင်္ဘောသဖန်း။ 1B), အစောပိုင်းသို့မဟုတ်နှောင်းပိုင်းအဆင့်ဖြစ်စေအတွက်ပေါကျကှဲအရေအတွက်ပြောင်းလဲမှုများကိုပြသခဲ့သည် (သင်္ဘောသဖန်း။ 6B, D ကို).
Burst နံပါတ်နှင့်မတူဘဲ၊ burst ကြာချိန်သည်ငါနဲ့သိသိသာသာကွာခြားမှုမရှိပါcos နှင့် Ccos မည်သည့်နေ့တွင်မဆိုအုပ်စုများ (သင်္ဘောသဖန်း။ 6E) ။ အမှန်စင်စစ်ငါနှစ် ဦး စလုံးအဘို့cos နှင့် Ccos အုပ်စုများ၊5ရက်သတ္တပတ်များစွာပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းရယူသုံးစွဲနိုင်မှုအကြားကွဲကွဲပြားပြားပေါက်ကွဲမှု (သင်္ဘောသဖန်း။ 6E) ။ ဤရွေ့ကားတင်းမာမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုငါ၌ပျက်ကွက်ခဲ့ကြသည်CS နှင့် CCS ကြွက် (သင်္ဘောသဖန်း။ 6F).
အချုပ်အားဖြင့်ရလဒ်များအရရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ် COS ကိုလက်လှမ်းမီရရှိမှုသည် Access session တစ်ခု၏အစောပိုင်းအဆင့်တွင်သုံးစွဲမှုတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဤတိုးတက်မှုသည်စားသုံးမှုကိုစတင်ရန်တိုတောင်းသောအချိန်ကာလနှင့် (စားသုံးရန်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်တသမတ်တည်းကိုက်ညီမှု) တိုးများလာခြင်းအပြင်ကန ဦး လျက်လျက်နှုန်းပိုမိုများပြားလာခြင်းနှင့်ပိုမိုကြာမြင့်စွာကွဲလွင့်ခြင်းတို့နှင့်အတူတကွ တွဲ၍ ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ COS အစားကြွက်များကို CS ပေးစဉ်စားသုံးမှုတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာခြင်းသာမကလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အရသာရှိမှုညွှန်းကိန်းများတိုးပွားလာခြင်းမရှိသဖြင့်တွေ့ရှိရသည်။ ရလဒ်များအရမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုသည်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာခြင်းနှင့်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာခြင်းကြောင့်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း ကျော်လွန်၍ ကန ဦး လေ့လာသင်ယူခြင်းနှင့်နီအိုခေါင်ရောဂါပျောက်ကင်းခြင်းမှသည်
4.1 ။ အကျဉ်းချုပ်
မူးယစ်ဆေးဝါးအစာစားခြင်းသည်ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်း (သို့) ဇီဝဖြစ်စဉ်လိုအပ်မှုကြောင့်မဟုတ်သောလျင်မြန်။ အလွန်အကျွံအစာစားသုံးမှု၏ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်များ (2 နာရီသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်း) ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။2] ။ အစားအစာစားသုံးမှုကိုထိန်းညှိပေးသည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ်တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏သက်ရောက်မှုများကိုလေ့လာရန်ယခင်တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများသည်ကယ်လိုရီပါဝင်မှုမြင့်မားသောအစားအစာများ၊5, 10, 11, 16, 41] ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရက်အလွန်အကျွံစားတဲ့ရောဂါဒါမှမဟုတ် bulimia ခံစားနေရတဲ့လူတွေဟာအများအားဖြင့်ချိုသောအဆီဓာတ်မြင့်မားတဲ့အစာကိုစားနေကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။47-49] ။ အာဟာရကြွယ်ဝသောအစားအစာနှင့်သောက်သုံးမှုများကိုအပြန်အလှန်ဆက်နွှယ်မှုဖြစ်စဉ်၊ လှုံ့ဆော်မှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်နိုင်သည့်နည်းစနစ်များ (ဥပမာ - မူးယစ်ဆေးဝါးများကို intracranial microinjection ကဲ့သို့) သုံး၍ အရက်သောက်ခြင်းကိုအခြေခံသည့်အာရုံကြောယန္တရားများကိုလေ့လာရန်၎င်းဖြစ်စဉ်များကိုအထီးကျန်စွာဆန်းစစ်ရန်အသုံးဝင်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းတစ်ခုမှာယာယီစားသုံးမှုပုံစံကိုစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Lickometer မှတဆင့်အရည်အစာထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်အလွန်လွယ်ကူစေသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Corwin နှင့်အစိုင်အခဲအဆီသုံးပြီးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များတီထွင်ခဲ့သောမူးယစ်ဆေးဝါးမော်ဒယ်များအပေါ် အခြေခံ၍ အဆီဓာတ်မြင့်မားသောအငွေ့ပျံသုံးစွဲမှုကိုပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသုံးစွဲနိုင်သောပုံစံကိုတီထွင်ခဲ့သည်။11, 12] နောက်ပိုင်းတွင်အစိုင်အခဲအဆီ / သကြားအရောအနှောများသို့တိုးချဲ့ခဲ့သည်။10, 13, 16] ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မျိုချမိသူဟာစျေးသိပ်မကြီးတဲ့ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရရှိနိုင်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများ (စူပါမားကတ်မုန့်၊ ပြောင်းဖူးဆီနှင့်သကြား) တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောကြောင့်အထူးပြင်ဆင်စရာပစ္စည်းများမလိုအပ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မော်ဒယ်ကိုအာရုံကြောခြယ်လှယ်ခြင်း၊ မူးရူးသုံးစွဲမှုစဉ်အတွင်းအာခေါင်။
4.2 ။ စားသုံးမှုပုံစံနှင့်ယခင်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းရယူသုံးစွဲနိုင်မှုပုံစံများနှင့်ဆက်နွယ်မှု
ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များသည်အစိုင်အခဲချိုသောအဆီအစားအစာများကိုပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းရရှိသောကြွက်များအတွက်အစောပိုင်းကတည်ထောင်ထားသည့်ရလဒ်များနှင့်ဆင်တူသည်။ အထူးသဖြင့်ကြွက်များအား COS (ခရင်မ်၊ ဆီ၊ သကြား၊ သို့) အားခဏခဏဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသောအခါ၊cos သုံးစွဲမှုကာလအတွင်းသုံးစွဲမှုသည်ယခင်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များနှင့်အညီတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာခဲ့သည်။5-12] ။ ထို့အပြင်ငါcos COS ကိုလက်လှမ်းမီပြီးနောက် Chow စားသုံးမှုလျော့နည်းသွားပြီးကြွက်များတွင်“ သွားသွား” ပုံစံကိုပြသခဲ့သည်။ အစောပိုင်းမော်ဒယ်များမှလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကွဲပြားမှုများရှိသော်လည်းယခင်အိမ်များတွင်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအိမ်တွင်းလှောင်အိမ်များနှင့်တစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်ခြင်း လေ့လာမှုများရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ (မဟုတ်ပါ။ (COS access ကိုသီးခြားအခန်းများတွင်ပေးအပ်ထားသည်) ။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်မှာပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဖြင့် COS လက်လှမ်းမီသည့်နေ့များတွင်ကယ်လိုရီစားသုံးမှုသည် 24 နာရီအတွင်းရှိကြွက်များတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းအတာများနှင့် COS ကိုအဆက်မပြတ်ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤရလဒ်သည်အစိုင်အခဲအဆီဓာတ်မြင့်မားသောအစားအစာကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ယခင်တွေ့ရှိချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။5, 10, 13, 50] ။ ကယ်လိုရီစားသုံးမှုအတွက်ကြီးမားသောအတက်အကျငါသောအသားတင်ရလဒ်နှင့်အတူ, အလေးချိန်အပြိုင်အတက်အကျသွေးဆောင်cos ကြွက်များသည်ကိုယ်အလေးချိန်မပြည့်မီသောကြွက်များထက်ကိုယ်အလေးချိန်ပိုမြန်သည်။ အတူတူယူ, ဤရလဒ်များကိုအစိုင်အခဲအဆီမြင့်အစားအစာမှပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း access ကိုသုံးပြီးယခင်လေ့လာတွေ့ရှိချက်ထင်ဟပ် [5, 10-13, 50] နှင့်အရည် COS မှပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း access ကိုအစိုင်အခဲ high- အဆီအစားအစာကိုအသုံးပြု။ သွေးဆောင်ကြောင်းမှသိသိသာသာဆင်တူကြောင်းမူးရူးအပြုအမူဖြစ်ပေါ်စေသည်အကြံပြုအပ်ပါသည်။
အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ကြွက်များသည်ခန်ဓာနှင့်သကြားဓာတ်နည်းသောကယ်လိုရီနည်းသောဖြေရှင်းချက်ကိုပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဖွင့်ပေးခဲ့သည် (CS; I)CS COS ဆေးပေးသောကြွက်များတွင်စားသုံးမှုနှုန်းသည်တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာခြင်းနှင့်သိသိသာသာလွှင့်သွားခြင်းပုံစံကိုမပြသခဲ့ပါ။ ဤရလဒ်များအရဤအချိန်ဇယားတွင်အရက်စွဲခြင်းကဲ့သို့သောအပြုအမူများဖြစ်ပေါ်လာရန်မြင့်မားသောအဆီနှင့် / သို့မဟုတ်ကယ်လိုရီပါဝင်မှုကိုလိုအပ်သည်။ သို့သော်ရလဒ်များအနေဖြင့်အငွေ့ပျံခြင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် CS အတွက်ထက် COS အတွက်သာလွန်သော lickefficiency (lick per ရရှိသောအရည်ပမာဏ) ၏ function တစ်ခုဖြစ်နိုင်ခြေကိုမတားမြစ်ပါ။ ဒီခြားနားချက်အတွက်အကြောင်းပြချက်မသိရသေးပေမယ့်ဖွယ်ရှိ COS နှင့် CS ၏ကွဲပြားခြားနားသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ ပိုမိုထိတွေ့မိသည့်ထိရောက်မှုကြောင့်မြှင့်တင်သောကယ်လိုရီစားသုံးမှုနှုန်းသည် I တွင်စားသုံးမှုမြင့်တက်လာနိုင်သည်cos အုပ်စု။ ထို့အပြင်ပြောင်းဖူးဆီတွင်တွေ့ရသောအဆီအမျိုးအစားများသည်ကြွက်များသည်အရက်သောက်ခြင်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်အဆီ (emulsion) ကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်သည်။ အမှန်မှာကြွက်များသည်ပြောင်းဖူးဆီ၏ emulsions ကို 100% ပြောင်းဖူးဆီထက် ပို၍ ပင်စားသုံးကြသည်၊ ပြောင်းဖူးဆီမှထွက်သောအဆီများသည်အစိုင်အခဲအဆီကဲ့သို့စားသုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်၊51-53] ။ ထို့ကြောင့်အရက်သောက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောယခင်လေ့လာမှုများသည်အစိုင်အခဲအဆီနှင့်သကြားအရောအနှောကိုအသုံးပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။5, 16], emulsified ပြောင်းဖူးဆီရှိနေခြင်း COS အပေါ်သို့ပေးသောသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့် CS မဟုတ်ဘဲမူးရူးစားသုံးမှုကိုနှိုးဆွနိုင်စွမ်း။ ဤယူဆချက်ကိုချိုချဉ်သောပြောင်းဖူးဆီ / ရေ emulsions (မုန့်မပါဘဲ) သည် COS မှပြုလုပ်သောမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်တူသည့်အပြုအမူကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ သို့သော်ထိုသို့ဖြစ်ခဲ့လျှင်ပင် COS သည်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကြောင့်အနာဂတ်စမ်းသပ်မှုများတွင်အသုံးပြုရန်ပိုကောင်းနိုင်သည်။ ရေရှည်တည်ငြိမ်မှုနှင့်အတူပြောင်းဖူးရေနံ / ရေ emulsion ၏ COS ပြင်ဆင်မှုတစ်ဝါယာကြိုး whisk ထက်မပိုခေတ်မီဆန်းပြားယန္တရားလိုအပ်သည်သော်လည်း, စျေးကြီးသောပစ္စည်းကိရိယာများ (microfluidizer) လိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ COS မူးရူးမော်ဒယ်သည်ကြွက်များကိုတစ်ပတ်လျှင်သုံးရက်စားသုံးရန်အစာကိုထောက်ပံ့ပေးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက် 24 နာရီအတွင်းပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည့်နောက် 24 နာရီအတွင်း chow စားသုံးမှုလျှော့ချခြင်းကိုလေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ခဲ့သည်။ COS (သို့သော် CS မဟုတ်ပါ) ကိုပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသုံးပြီးသွားပြီးနောက် 24 နာရီအတွင်း Chow စားသုံးမှုသည်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုမှ COS ကိုလုံးဝလက်လှမ်းမမီသော 24 နာရီသုံးစွဲမှုထက်သိသိသာသာနိမ့်သည် (N)cos အဆီနှင့်ချိုသောအဆီအစားအစာတို့ဖြင့်အစောပိုင်းအစီရင်ခံစာများနှင့်ကိုက်ညီသည်။10, 12, 13] ။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်များနှင့်အတူဤရလဒ်များကမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းသည်ကာလတိုစားသုံးမှုကာလပြီးနောက်စားသုံးမှုကိုအကန့်အသတ်ဖြစ်စေသည့်ရေရှည်စားနေခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုသက်ဝင်စေသည်ဟုဖော်ပြသည်။ ဤရလဒ်သည်ကြွက်များသည်တန်းတူကယ်လိုရီသိပ်သည်းဆမြင့်မားသောဘိုဟိုက်ဒရိတ်အစာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအဆီဓာတ်မြင့်မားသောအစားအစာများကိုအလွန်အကျွံသုံးစွဲကြောင်းတွေ့ရှိချက်များအရသိရှိရသည်။28, 29, 54-58] ။ အဆီနှင့်အတူ Intragastric ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဘိုဟိုက်ဒရိတ်တစ်ခု isocaloric ဆေးထိုးနှင့်အတူကြိုတင်တင်ထားသည်ထက်နောက်ဆက်တွဲစားသုံးမှုလျော့နည်းတားစီးအတွက်ရလဒ်များ  နှင့်ဤသက်ရောက်မှုများသည်ကြာရှည်ခံသည် (တစ်နေ့အထိ)  ။ ထို့ကြောင့်ကြွက်များသည်အဆီကိုအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းကြောင့်အဆီပိုများသည် (ကယ်လိုရီနှုန်း) နည်း၍ ပိုတက်ဆီယမ်ပျော့ပျောင်းသောယန္တရားများကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေသည်။ ဤလေ့လာမှုများက COS ၏သကြားပါဝင်မှုနှင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းလုပ်ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတွင်အသုံးပြုသောအခြားအဆီ / သကြားအရောအနှောများသည် Chow စားသုံးမှုကိုလွန်ကဲစွာတားဆီးရန်များစွာအထောက်အကူပြုနိုင်သည်ဟုအကြံပြုသည်။ သကြားနှင့်အဆီပါဝင်သောအူလမ်းကြောင်း၏အကျိုးဆက်များကိုတိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်သောထပ်မံလေ့လာမှုများသည်အရက်နှင့်သောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောရေရှည်စိတ်ကျေနပ်မှု၌အဆီနှင့်သကြားကွဲပြားခြားနားသောအခန်းကဏ္clarကိုရှင်းလင်းရန်လိုအပ်သည်။
COS သုံးစွဲမှုသည်ပထမ 8 ရက်များ (2.5 ရက်သတ္တပတ်များ) ကြားဖြတ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းတွင်တဖြည်းဖြည်းတိုးလာခဲ့သည်။ မှတ်သားဖွယ်မှာ၊ CS ကိုပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအသုံးပြုခွင့်ပေးသောကြွက်များသည်အလားတူတဖြည်းဖြည်းတိုးလာခြင်းမရှိပေ။ COS နှင့် CS ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းလက်လှမ်းမီအုပ်စုများသည်သုံးစွဲမှုကိုပထမနှင့်ဒုတိယနေ့အထိသုံးစွဲမှုသိသိသာသာများပြားလာသည်။ အုပ်စုနှစ်ခုလုံးမှကြွက်များသည် lickometers မည်သို့လေ့လာရမည်နှင့်ကန ဦး နီဖော့ဘီးယားကိုမည်သို့ကျော်လွှားရမည်ကိုလေ့လာရန်လိုအပ်သောကြောင့်သုံးစွဲမှု၏ကန ဦး (1 မှယနေ့ 2) တိုးလာမှုကိုဤဖြစ်စဉ်များနှင့်ဆက်စပ်ဖော်ပြနိုင်သည်။ သို့သော် I အတွက်နောက်ထပ်တဖြည်းဖြည်းတိုးcos ကငါအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိမခံခဲ့ရဘာလို့လဲဆိုတော့အုပ်စုတစ်စုသည်ဤဖြစ်စဉ်များနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိပါCS အုပ်စု။ အလားတူတဖြည်းဖြည်းတိုးများလာခြင်းကို3ရက် / အပတ်သို့မဟုတ်နေ့စဉ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းရယူသုံးစွဲနိုင်သောအစီအစဉ်များတွင်ချိုသောနှင့် / သို့မဟုတ်အဆီမြင့်မားသောအစားအစာသို့မဟုတ်အရည်ကိုပေးသည့်ကြွက်များတွင်တွေ့ရသည်။9-12, 14, 59] ။ ဤရလဒ်သည်ကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မြင့်မားသောကယ်လိုရီများသောအစားအစာများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်သုံးစွဲခွင့်ပေးသည်။ နေ့စဉ်စားသုံးမှုသည်ကန ဦး အထွတ်အထိပ်မှတဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာသည်။5, 6, 10] ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှု၌ရှိသကဲ့သို့ (သဖန်းသီး။ 3), ဒါမှမဟုတ်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်နေဆဲ [12, 14] ။ ထို့ကြောင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းရယူသုံးစွဲနိုင်သောမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကာလအတွင်းအလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုသည်အကန့်အသတ်မရှိသောဘာသာရပ်များတွင်မရှိသောစားသုံးမှုမြင့်တက်လာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အဆီနှင့် / သို့မဟုတ်ကယ်လိုရီပါဝင်မှုအပေါ်မူတည်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကတိုးပွားမှုသည်နီအိုဖီယာကိုစားသုံးရန်သို့မဟုတ်ကျော်လွှားရန်သင်ယူခြင်း၏ရိုးရှင်းသောအကျိုးဆက်တစ်ခုမဟုတ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ယင်းအစား၊ တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာသောစားသုံးမှုသည် CSS နှင့်ကွဲပြားခြားနားသော COS ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် / သို့မဟုတ်အာဟာရဂုဏ်သတ္တိများ၏အကျိုးဆက်ဖြစ်သောအခြားလုပ်ငန်းစဉ်များကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
ယခင်ကြွက်မူးရူးမော်ဒယ်များသည်မြင့်မားသောအဆီအစားအစာများကိုနေ့စဉ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအသုံးပြုခြင်းကို3ရက်များ / ရက်သတ္တပတ်များအရက်မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲခြင်းကိုထိန်းချုပ်သည်။6, 11, 12, 15, 16, 40, 42, 60-63] ။ သို့သော်အခြားလေ့လာမှုများကနေ့တိုင်းအရက်သောက်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သောမော်ဒယ်ကိုအသုံးပြုခြင်း [9, 10, 13, 14, 35, 59]; အထူးသဖြင့်မြင့်မားသောကယ်လိုရီစားသုံးမှုစားသုံးမှုကိုနေ့စဉ်သုံးစွဲမှုကာလများတစ်လျှောက်တွင်ပိုမိုမြင့်တက်လာစေသော်လည်း၊ ဤအရှိန်မြင့်တက်မှုသည်3ရက်များ / ရက်သတ္တပတ်လက်လှမ်းမီမှုထက်သိသိသာသာလျော့နည်းနိုင်သည်။6] ။ ထို့ကြောင့်၊ အသင့်အတင့်အနေနှင့်အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်စေရန်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုရရှိနိုင်သော protocol များနှင့် ပတ်သက်၍ ရှုပ်ထွေးမှုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များသည်အလားအလာရှိသောဖြေရှင်းချက်ကိုပေးသည်။ သူတို့က COS မူးယစ်ဆေးဝါးအုပ်စုသည်အငွေ့ပျံနေသောစားသုံးမှုကိုမပြသသည့်အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းတွင် CS ကိုပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းလက်လှမ်းမီမှုကိုပေးသောထိန်းချုပ်အုပ်စုတစ်ခုကဖော်ပြသည်။ ငါအတွေ့အကြုံcos ကြွက်များသည်ငါထက်အချိန်ကာလအတွင်းကယ်လိုရီပိုမိုစားသုံးကြသည်CS ကြွက်များနှင့်ထို့ကြောင့်ဤအုပ်စုများအကြားနှိုင်းယှဉ်ငါနိဂုံးချုပ်ခွင့်ပြုပါတယ်cos ကြွက်များသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်း၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့်ကိုက်ညီသည်။ ထို့ကြောင့် COS နှင့် CS (သို့မဟုတ်ပိုမိုယေဘုယျအားဖြင့် high- နှင့် low- ကယ်လိုရီသို့မဟုတ် high- နှင့်နိမ့်အဆီအရည်) ၏အသုံးပြုမှုကိုမူးရူးစားသုံးမှုများအတွက်ထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်သည့်အတွက်နောက်ထပ်စမ်းသပ်မှုများအတွက်အသုံးဝင်သောသက်သေပြလိမ့်မည်။ ဤပုံစံသည်လူသားတို့အကွားအစာစားခြင်းကိုထင်ဟပ်စေသည့်ထပ်ဆောင်းအားသာချက်ရှိသည်။ လူသားများအနေဖြင့်အဆီများသော၊ ကယ်လိုရီမြင့်မားသောအစားအစာများကိုမူးယစ်သောက်သုံးခြင်း၊ အရက်မသောက်သောအစာများတွင်ပုံမှန်အားဖြင့်လျော့နည်းသောကယ်လိုရီသိပ်သည်းသောအစားအစာများကိုစားသုံးခြင်းပါဝင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူလူကိုအရက်သောက်သောသူတို့သည်အစိုင်အခဲနှင့် Semi-solid အစားအစာများကိုစားသုံးသော်လည်း COS နှင့် CS သည်အရည်များဖြစ်သည်။
4.3 ။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအတွက်လှုံ့ဆော်မှု၊
ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်စဉ်းစားထားသောကွဲပြားသောလုပ်ငန်းစဉ် (၃) ခု၏ပြောင်းလဲမှုများသည်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းလက်လှမ်းမီကာလများအတွင်းသုံးစွဲမှုတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာခြင်းအပေါ်အခြေခံနိုင်သည် - (1) အရသာခံမှု - မောင်းနှင်သုံးစွဲမှုတိုးလာနိုင်သည်။ စားသုံးမှုကိုစတင်ရန် (2) စေ့ဆော်မှုသည်မြင့်တက်နိုင်သည်။ နှင့် / သို့မဟုတ် (3) စိတ်ကျေနပ်မှုယန္တရားသည်ထိရောက်စွာလျှော့ချနိုင်ခြင်းဖြင့် Access ကာလအတွင်းရရှိသော“ ထမင်း” ကိုကြာရှည်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များသည်အရသာရှိစေရန်လှုံ့ဆော်ပေးသောစားသုံးမှုနှင့်စားသုံးရန်လှုံ့ဆော်မှုနှစ်ခုလုံးအတွက်တိုးမြှင့်မှုအတွက်အထောက်အထားများကိုပေးသည်။ အထူးသဖြင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းလက်လှမ်းမီရရှိသည့်နေ့များတစ်လျှောက် COS သုံးစွဲမှုတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာခြင်းနှင့်အတူပထမအူသံမှအောင်းနေမှုလျော့နည်းလာခြင်း၊ အသည်းအသန်ပေါက်ကွဲခြင်းများပြားလာခြင်း၊ ပထမမိနစ်တွင်အမြီးများတိုးပွားလာခြင်း၊ ယခင်နှစ်ခုသည်လှုံ့ဆော်မှုဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းများဖြစ်သည်။36, 37, 64] ။ စားသုံးမှုသိသိသာသာတိုးလာအဖြစ်ဤအရာတစ်ခုချင်းစီကိုရက်ပေါင်းများစွာသိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဤပုံစံအပြောင်းအလဲများသည်စားသုံးမှုကိုတိုးမြှင့်လိုသောကြောင့် ၀ င်ရောက်မှုကဏ္sessionsများအတွင်းစားသုံးမှုပိုမိုများပြားလာခြင်းသည်အနည်းဆုံးဤဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများ၏အကျိုးဆက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ငါလှုံ့ဆျောမှုနှင့်အရသာ၏အစီအမံအတွက်ဤတိုးလေ့လာတွေ့ရှိမခံခဲ့ရပါCS တိုးမြှင့်စားသုံးမှုမပြခဲ့ပါဘူးသောအုပ်စုသည်။ ထို့ကြောင့်တိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အာခေါင် CS နှင့်နှိုင်းယှဉ် COS ၏မြင့်ကယ်လိုရီနှင့် / သို့မဟုတ်အဆီအကြောင်းအရာ၏အကျိုးဆက်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။
လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အရသာခံနိုင်မှုတိုးပွားလာခြင်း၏လေ့လာတွေ့ရှိချက်များကအဘယ်အရာကိုအခြေခံနိုင်သနည်း။ လှုံ့ဆော်မှုသည်အာရုံကြောဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ အာရုံကြောဆိုင်ရာယန္တရားမျိုးစုံ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုထင်ဟပ်စေသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ဆောက်မှုဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုသည်အစားအစာကိုချဉ်းကပ်ရန်လှုံ့ဆော်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်၊ သို့သော်အစာစားခြင်းကဲ့သို့ပင်၊ ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်းမရှိသောဘာသာရပ်များတွင်ပင်အစားအစာနှင့်ဆက်စပ်သောလှုံ့ဆော်မှုကြောင့်အစားအစာကိုချဉ်းကပ်ရန်လှုံ့ဆော်ပေးသည်။65] ။ ကြွက်များကိုမူးယစ်ဆေးဝါးများတိုးပွားစေရန်လှုံ့ဆော်ပေးသည့်အခြေခံအာရုံကြောယန္တရားကိုမသိရှိရသေးပါ။ ဒါဟာအခန်းထဲရှိလှုံ့ဆော်မှု COS နှင့်ဆက်စပ်ဖြစ်လာသည်နှင့်အကျိုးဆက်, နောက်ပိုင်းအစည်းအဝေးများအတွက်မကြာခဏတိရိစ္ဆာန်ထဲတွင်နေရာအဖြစ် COS ၏စားသုံးမှုကိုရှာဖွေချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်အစပျိုးဖို့လှုံ့ဆျောမှု, ထိုကဲ့သို့သောအေးစက်ဖြစ်စဉ်ကိုပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းဆက်ဆက်ဖြစ်နိုင်သည် အခန်း။ ထို့ကြောင့်ငါပြသတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာလှုံ့ဆျောမှုcos ကြွက်များသည်ခြွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှု (COS) ၏အားဖြည့်စွမ်းအား၏လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်; CS ဖြေရှင်းချက်သည်ကန ဦး သင်ယူမှုထက် ကျော်လွန်၍ စားသုံးမှုတိုးလာစေရန်အားဖြည့်ရန်မလုံလောက်နိုင်ပါ။
လှုံ့ဆော်မှု - သွေးဆောင်ချဉ်းကပ်မှုအပြုအမူမကြာခဏနျူကလိယ accumbens ဖို့ dopamine စီမံကိန်းအပေါ်မှီခိုသည်66-69] နှင့်သcrose၏မူးရူးသုံးစွဲမှု accumbens အတွက် extracellular dopamine အတွက်မြင့်တက်ခြင်းဖြင့်လိုက်ပါသွား  ။ ထို့အပြင်မူးရူးကဲ့သို့စားသုံးမှုမြင့်မားသော D1 receptor နှင့် dopamine Transporter ဟူသောစကားရပ်အပါအ ၀ င် accumbens dopamine စနစ်အတွင်းရေရှည်ပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး D2 receptor expression ကိုလျော့နည်းစေသည်။8], dopamine လှုပ်ရှားမှု၌ရေရှည်အပြောင်းအလဲများမူးရူးအစားအစာတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းအကြံပြု။ အမှန်မှာ၊ ကြွက်များကိုကြာရှည်စွာခဏခဏ ၀ င်ခွင့်ပေးသောကြွက်များသည်အဆီအားဖြည့်ခြင်း၏တိုးတက်သောအချိုးအစားဇယားတွင်ပိုမိုမြင့်မားသော breakpoints များကိုပြသသည်။70] ။ ဒီလေ့လာတွေ့ရှိချက်ကအရသာရှိတဲ့အစာကိုအရသာခံစားတာကပိုကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့် mesolimbic dopamine ပါ ၀ င်မှုအတွက်နောက်ထပ်သက်သေအထောက်အထားကိုရရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောက်ချက်ကိုခိုင်မာစွာထောက်ခံရုံသာမကတိုးတက်သောအချိုး၏လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်သည် dopamine အပေါ်မူတည်သည်။71] ။ သို့သော် ထပ်မံ၍ လေ့လာမှုများအနေဖြင့် dopamine လုပ်ဆောင်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်ပြီးအရက်သောက်ခြင်းဖွံ့ဖြိုးလာသည်နှင့်အမျှစားသုံးရန်ပိုမိုစိတ်အားထက်သန်လာသည်။
လှုံ့ဆော်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ကိုက်ညီသောအပြုအမူဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများအပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရသာရှိစေရန်လှုံ့ဆော်ပေးသောစားသုံးမှုတိုးပွားလာခြင်း (ကန ဦး လျက်တိုးနှုန်းတိုးလာခြင်းနှင့်အမြတ်တိုးများလာခြင်း) တို့ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းအလွယ်တကူရှင်းပြနိုင်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဦး နှောက်ဖွဲ့စည်းပုံအတော်များများသည်အာဟာရပြည့်ဝသောစားသုံးမှုတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ၄ င်းတွင်နျူကလိယ accumbens၊ တစ် ဦး တည်းသောဝေစာ၏နျူကလိယ၊ အမိဂဒလာ၊ ventral pallidum၊ ventral tegmental ,ရိယာနှင့် lateral hypothalamus တို့ဖြစ်သည်။72-74] ။ အထူးသဖြင့် accumbens များတွင်μ opioid receptors44, 75-78] အာဟာရပြည့်ဝသောစားသုံးမှုကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာ, မူးရူးကဲ့သို့စားသုံးမှု accumbens အတွက် upregulated μ receptors နှင့်ဆက်စပ်နေသည် , တိုးမြှင့် opioidergic neurotransmission မူးရူး access ကိုစဉ်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိတိုးမြှင့် palatability -based စားသုံးမှုများအတွက်တာဝန်ရှိဖြစ်နိုင်သည်အကြံပြုသည်။ ဤရွေ့ကားယူဆချက် bingeing တိရိစ္ဆာန်များအတွက် opioid အဲဒီ receptor function ကို၏ထိုးဖောက်ခြယ်လှယ်နှင့်အတူနောက်ထပ်စမ်းသပ်စောင့်ဆိုင်း။
စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်မှာအာဟာရပြည့်ဝမှု၏အတိုင်းအတာများသည် I ၌သာတိုးတက်ခဲ့သည်cos ကြွက်များ, ဒါပေမယ့်ကို C ၌တည်၏cos အဖြစ်ကောင်းစွာအုပ်စုဖွဲ့။ ထို့ကြောင့်ဤရလဒ်များအရအာဟာရချို့တဲ့မှုကြောင့်မောင်းနှင်ရသောစားသုံးမှုကိုတိုးပွားစေသောကြောင့်၎င်းသည် COS ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာသုံးစွဲနိုင်ခြင်း၊ C အကြားခြားနားချက်cos ငါcos အုပ်စုများသည် C ဖြစ်သည်cos ကြွက်များ, ထိုပေးထားမျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်ဟုအဖြစ်, အလေးချိန်ရရှိခဲ့သည် ကြော်ငြာ libitum အဆီဓာတ်မြင့်မားစွာပါဝင်သောအစားအစာကိုစားသုံးခြင်းသည်အဝလွန်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။41, 79, 80] ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များအရအဆီဓာတ်မြင့်မားသောအစားအစာများကိုအာဟာရဖြစ်စေသောအစားအစာများကိုစားသုံးခြင်းဖြင့်အဝလွန်သူများအတွက်ပိုမိုစားသုံးသင့်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ယခင်လေ့လာမှုများကအဝလွန်ခြင်း၏အာနိသင်ကိုရှုပ်ထွေးစေသည်။ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုအနေဖြင့်အဆီနှင့်သcrucoseတို့၏ပါဝင်မှုနည်းပါးခြင်းသည်ကြွက်များထက်အဝလွန်ခြင်းအတွက်အရသာနည်းသည်။79] ။ အခြားလေ့လာမှုတစ်ခုအရအ ၀ လွန်ခြင်းကြောင့် sucrose အာဟာရပြည့်ဝမှုတိုင်းတာမှု (ပေါင်ပေါက်အရွယ်) ကိုလုံးဝမထိခိုက်ခဲ့ပါ။81] နှင့်အခြားတစ်ခုအနေဖြင့်အဝလွန်ကြွက်များ၏ stratability အတွက် palatability အစီအမံများလျော့နည်းသွားခဲ့သည်  ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုနှင့်ယခင်လေ့လာမှုများအကြားအရေးကြီးသောခြားနားချက်မှာ 24 hr စဉ်ဆက်မပြတ်ရရှိနိုင်သောတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူအဆီဓာတ်မြင့်မားစွာစားသုံးမိခြင်း၏အာနိသင်ကိုစမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်သည် (ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်အဝလွန်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအစားအစာ၏အာဟာရဓာတ်ကိုစမ်းသပ်သည်) ဖြစ်သည်။ တိရိစ္ဆာန်များသည်အိမ်လှောင်အိမ်အတွင်း၌အဆီမြင့်မားသောအစားအစာများဖြစ်သော်လည်းဆီသို့မဟုတ်ဆီးချိုရောဂါ၏အာနိသင်ကိုစစ်ဆေးသည်။ ဤဒီဇိုင်းများသည်ဆိုးဆိုးရွားရွားဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုမိတ်ဆက်ပေးနိုင်ပြီး၎င်းသည်ပိုမိုမြင့်မားသောအာဟာရဓာတ်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုလျော့နည်းစေသည့်စမ်းသပ်ဒီဇိုင်းများကိုအာဟာရဖြစ်စေသောစားသုံးမှုစွမ်းရည်သည်အဝလွန်သောဘာသာရပ်များတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်ဟုယူဆချက်ကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာစမ်းသပ်ရန်အသုံးပြုသင့်သည်။
COS ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်အသုံးပြုခွင့်ပေးသောကြွက်များသည်အရသာရှိစေရန်မောင်းနှင်သည့်စားသုံးမှုကိုပြသသော်လည်းပထမနေ့မှစပြီးယေဘုယျအားဖြင့်ကယ်လိုရီစားသုံးမှုနှင့် (COS စားသုံးမှု) လျော့နည်းကြောင်းပြသခဲ့သည်။သဖန်းသီး။ 2) ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကျေနပ်မှုအဖြစ်အချို့သောအခြားဖြစ်စဉ်ကို, ခြုံငုံစားသုံးမှုကန့်သတ်ရန်အတွက်အာခေါင်တိုးတိုးတန်ပြန်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဤသည်က COS နှင့်မတူသောကြွက်များထက်စိတ်ကျေနပ်မှုယန္တရားသည်အတွေ့အကြုံရှိ bingers များတွင်ပိုမိုထိရောက်မှုရှိ / မရှိဟူသောမေးခွန်းကိုပေါ်ပေါက်စေသည်။5မှth ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း access ကို၏ရက်သတ္တပတ်ငါcos ဝင်ရောက်ချိန်မှစပြီးကြွက်များသည်ပထမ ဦး ဆုံး 20-30 မိနစ်တွင်စားသုံးမှုသိသိသာသာကျဆင်းကြောင်းပြခဲ့သည်။ ဤသည်ကျဆင်းမှုအေးစက်နှင့်ခြွင်းချက်မရှိကျေနပ်မှုကြောင့်ဖွယ်ရှိသည်  နှင့်ပြောင်ပြောင်တောက်သောယန္တရားများသည်ကြွက်များကိုအငွေ့ပျံစေနိုင်သည့်အစွမ်းရှိပြီးလူ၏ bulimia လူနာများတွင်တွေ့ရှိချက်များပါဝင်သည်။83] ။ ယခင်သီတင်းပတ်များ (အထူးသဖြင့်ရက်သတ္တပတ် 5) ထက်ရက်သတ္တပတ် 1 တွင်ကျဆင်းမှုနှုန်းသည်ပိုမိုမြန်ဆန်သော်လည်းအစောပိုင်းနှင့်နှောင်းပိုင်းအစည်းအဝေးများ (လှုံ့ဆျောမှုနှင့်အရသာရှိစေရန်လုပ်ဆောင်ခြင်းများ) တွင်ကန ဦး စားသုံးမှုနှုန်းကွဲပြားမှုကြောင့်ဤအတိုင်းအတာကိုလွှမ်းမိုးနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းလက်လှမ်းမီကာလများအတွင်းစားသုံးမှုများတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာနိုင်ခြင်းရှိ၊ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, အတွင်းသုံးစွဲမှုအတွက်ခိုင်မာတဲ့အတွင်း - session ကိုကျဆင်းမှုထူထောင်မူးရူးသုံးစွဲမှုအပေါ်အာရုံကြောခြယ်လှယ်များ၏သက်ရောက်မှုကိုဆန်းစစ်သည့်အခါစိတ်ကျေနပ်မှုတစ်ခုအတိုင်းအတာအဖြစ်အနာဂတ်လေ့လာမှုများအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
4.4 ။ နိဂုံး
ကျွန်ုပ်တို့သည်ချိုသောအဆီတစ်မျိုးမြင့်မားသောအရည်ကိုကြွက်များတွင်အသုံးပြုနိုင်ပြီးအစိုင်အခဲပါသောအဆီမြင့်အစားအစာကို အသုံးပြု၍ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းရယူသုံးစွဲနိုင်သောမော်ဒယ်များတွင်ယခင်ကတွေ့ရှိခဲ့သောမူးယစ်ဆေးဝါးကဲ့သို့သောစားသုံးမှုကိုသွေးဆောင်နိုင်သည်။ အရည်အစာကျွေးခြင်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်နည်းလမ်းများစွာဖြင့်အကျိုးရှိသည်။ ပထမတစ်ခုအနေဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအတွက်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူသုံးစွဲနိုင်ရန်အချိန်ဇယားအတိုင်းကယ်လိုရီနည်းသောအရည်ကိုပေးနိုင်သည်။ ဒုတိယအချက်မှာ lickometers နှင့်စားသုံးမှုကိုတိုင်းတာခြင်းဖြင့်ရရှိသောယာယီတိကျမှုသည်အရက်သောက်ခြင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုပိုမိုစစ်ဆေးရန်အထူးသဖြင့်တိရိစ္ဆာန်များအား electrophysiology ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အရည်မြင့်မားသောအဆီပါစားသုံးမိသောဓာတုဆေးရည်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကြွက်များကိုနှာခေါင်းသွေးယိုခြင်းမှထွက်လာသည့်ကြွက်များအတွင်းစိတ်ရှုပ်ထွေးမှု၊ လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အာဟာရရှိမှုတို့၏ကွဲပြားခြားနားမှုအတွက်သက်သေအထောက်အထားများကိုစုဆောင်းရန် (ဥပမာ neuroactive ဒြပ်ပေါင်းများကိုဒေသတွင်း microinjection) စုဆောင်းနိုင်သည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဏုကြည့်ရှုတည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကို အသုံးပြု၍ အဆက်မပြတ် ၀ င်ရောက်နိုင်သည့်ကာလများအတွင်းစားသုံးမှုတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာခြင်းသည်အနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်စားသုံးမှုကိုစတင်ရန်လှုံ့ဆော်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အရသာရှိစေရန်မောင်းနှင်သည့်စားသုံးမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းပြသရန်ဖြစ်သည်။ COS မူးယစ်ဆေးကြွက်များတွင်ဤဖြစ်စဉ်များကိုထပ်မံစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းကမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအခြေခံအာရုံကြောဆိုင်ရာယန္တရားများကိုပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်ရန် ဦး ဆောင်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ချိုသောအဆီပါဝင်သောအရည်ကို သုံး၍ အရက်သေစာသောက်သုံးခြင်း၏ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းလက်လှမ်းမီမှုပုံစံကိုတည်ဆောက်သည်
လျက် microstructure ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလှုံ့ဆျောမှုနှင့် palatability dissociates
အဆက်မပြတ်ဖက်တီးဓာတ်ပါ ၀ င်မှုအားပေးသောကြွက်များသည်အ ၀ လွန်လာပြီးစားချင်စိတ်ကိုတိုးပွားစေသည်
ဒေါက်တာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် အသုံးဝင်သောဆွေးနွေးမှုများအတွက် Gary Schwartz နှင့် Nicole Avena၊ Dr. Schwartz နှင့် operant အခန်းများကိုအသုံးပြုရန်နယူးယောက်အဝလွန်အဟာရသုတေသနဌာန၏တိရိစ္ဆာန်စွမ်းအင်ဟန်ချက်ညီသည့် Phenotyping Core နှင့် Operating Chambers အသုံးပြုရန် Niacet ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် Niacet ကော်ပိုရေးရှင်းတို့သည်သူတို့၏ရက်ရောသော stearoyl lactylate လက်ဆောင်အတွက် Niacet ကော်ပိုရေးရှင်း။ ဤသုတေသနကို Klarman မိသားစုဖောင်ဒေးရှင်း၊ NARSAD နှင့် NIH (MH092757) မှ SMN သို့လည်းကောင်း၊ SL သို့ Hilda နှင့် Preston Davis ဖောင်ဒေးရှင်းမှထောက်ပံ့ငွေဖြင့်လည်းကောင်းထောက်ပံ့ခဲ့သည်။
ဤစာတမ်းသည်အောက်ပါထောက်ပံ့ငွေ (s) ကထောက်ခံခဲ့သည်:
စိတ်ကျန်းမာရေးအမျိုးသား Institute မှ: NIMH R21 MH092757 || MH ။
မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျု: NIDA R01 DA019473 || DA ။
1 ။ Bulik CM, Reichborn-Kjennerud T. ဆေးဝါးဖြင့်အစာစားခြင်းရောဂါ။ Int J ကို Disord စားပါ။ 2003; 34 (Suppl) - S39-46 ။ [PubMed]
2 ။ သင်္ချာ WF, Brownley Ka, မို X ကို, Bulik CM ။ မူးရူးစား၏ဇီဝဗေဒ။ အစာစားချင်စိတ်။ 2009; 52: 545-53 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
3 ။ Corwin RL, Avena NM, Boggiano MM ။ အစာကျွေးခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်: ကြွက်စားခြင်း၏သုံးကြွက်မော်ဒယ်များမှအမြင်များ။ Physiol Behav ။ 2011; 104: 87-97 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
4 ။ Corwin RL, Buda-Levin A. အရက်မူးစားခြင်းအပြုအမူပုံစံများ။ Physiol Behav ။ 2004; 82: 123-30 [PubMed]
5 ။ Bello NT၊ Guarda AS၊ Terrillion CE၊ Redgrave GW, Coughlin JW, Moran TH ။ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များစားသုံးခြင်းအစာစားခြင်းအပြုအမူ၊ ဟော်မုန်းပရိုဖိုင်းနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူယောက်ျားကြွက်များတွင်စမ်းသပ်သည့်မုန့်ညက်၏ c-Fos တုံ့ပြန်မှုများကိုပြောင်းလဲစေသည်။ နံနက် J ကို Physiol Reg Integr Comp Physiol ။ 2009; 297: R622-31 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
6 ။ Babbs RK, Wojnicki FH, Corwin RL ။ မူးရူးစားသုံးခြင်းအကဲဖြတ်။ ယခင်ကအငွေ့ပျံနေသောကြွက်များတွင်စုဆောင်းအချက်အလက်များ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ အစာစားချင်စိတ်။ 2012; 59: 478-82 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
7 ။ Colantuoni ကို C, Rada P ကို, ဆက်မက်ကာသီ J ကို, Patten ကို C, Avena မိုင်, Chadeayne တစ်ဦးက, et al ။ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း, အလွန်အကျွံသကြားစားသုံးမှု endogenous opioid မှီခိုဖြစ်ပေါ်စေသည်အထောက်အထား။ အဝလွန်ခြင်း Res ။ 2002; 10: 478-88 ။ [PubMed]
8 ။ Colantuoni ကို C, Schwenker J ကို, ဆက်မက်ကာသီ J ကို, Rada P ကို, Ladenheim B, Cadet JL, et al ။ အလွန်အကျွံတွင်းသကြားဓာတ်စားသုံးမှု dopamine နှင့်ဦးနှောက်အတွက် mu-opioid receptors မှ binding ပွောငျးလဲ။ Neuroreport ။ 2001; 12: 3549-52 ။ [PubMed]
9 ။ Avena မင်, Rada P ကို, Hoebel BG ။ ကိုယ်အလေးချိန်မကျသည့်ကြွက်များသည် dopamine ထုတ်လွှတ်မှုကိုတိုးမြှင့်ပေးပြီး sucrose ကိုပိတ်ဆို့နေစဉ်နျူကလိယအတွင်းရှိ acetylcholine တုန့်ပြန်မှုကိုအားနည်းစေသည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2008; 156: 865-71 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
10 ။ Berners LA က, Avena မိုင်, Hoebel BG ။ Bingeing, Self-ကန့်သတ်ခြင်း, မွှေးအဆီဓာတ်စာကန့်သတ် access ကိုအတူကြွက်များတွင်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ အဝလွန်ခြင်း (Silver, နွေဦး) 2008; 16: 1998-2002 ။ [PubMed]
11 ။ Corwin RL, Wojnicki FH, Fisher က Jo, Dimitri စင်ကာပူဒေါ်လာ, ဆန် HB, Young ကနေ MA ။ တစ်ဦးဓါတ်အဆီ option ကိုကန့်သတ် access ကိုအထီးကြွက်များတွင်စားသုံးမိအပြုအမူသော်လည်းမခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုသာသက်ရောက်သည်။ Physiol ပြုမူနေ။ 1998; 65: 545-53 ။ [PubMed]
12 ။ Dimitri စင်ကာပူဒေါ်လာ, ဆန် HB, Corwin RL ။ အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်အစားအစာစားသုံးမှုနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုအပေါ်တစ်ဦးအဆီ option ကိုကန့်သတ် access ကိုသက်ရောက်မှု။ int J ကို disorders စားပါ။ 2000; 28: 436-45 ။ [PubMed]
13 ။ Kinzig KP, Hargrave SL, ဂုဏ်ထူး, MA ။ Bing-type အမျိုးအစားစားထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစိတ်ဖိစီးမှုမှ corticosterone နှင့် hypophagic တုံ့ပြန်မှု attenuates ။ Physiol ပြုမူနေ။ 2008; 95: 108-13 ။ [PubMed]
14 ။ Rada P ကို, Avena မိုင်, Hoebel BG ။ သကြားပေါ် Daily သတင်းစာ Bing အကြိမ်ကြိမ် accumbens shell ကိုအတွက် dopamine ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ neuroscience ။ 2005; 134: 737-44 ။ [PubMed]
15 ။ Wojnicki FH, ဂျွန်ဆင် DS, Corwin RL ။ Access ကိုအခြေအနေများကြွက်များတွင်မူးရူး-type အမျိုးအစားအတိုကောက်စားသုံးမှုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ Physiol ပြုမူနေ။ 2008; 95: 649-57 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
16 ။ Wong က KJ, Wojnicki FH, Corwin RL ။ Baclofen, raclopride နှင့် naltrexone differential ကန့်သတ်လက်လှမ်းအခြေအနေများအောက်တွင်အဆီ / sucrose အရောနှောများစားသုံးမှုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2009; 92: 528-36 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
17 ။ Davis ကနေ C, Carter က JC ။ တစ်ခုစွဲရောဂါအဖြစ် compulsive ကျော်။ သီအိုရီများနှင့်သက်သေအထောက်အထားများတစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ အစာစားချင်စိတ်။ 2009; 53: 1-8 ။ [PubMed]
18 ။ Avena မိုင် မူးရူးစားခြင်း - တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်များမှ neurochemical ထိုးထွင်းသိမြင်မှု။ Disord စားပါ။ 2009; 17: 89-92 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
19 ။ Avena မိုင်, Rada P ကို, မော N ကို, Hoebel BG ။ တစ်မူးရူးအချိန်ဇယားကိုထုတ်ပြန်အပေါ် Sucrose အတုအယောင်နို့တိုက်ကျွေးရေးအကြိမ်ကြိမ် dopamine accumbens နှင့် acetylcholine မွတ်မပြေနိုင်သောတုံ့ပြန်မှုရှင်းလင်းစေပါတယ်။ neuroscience ။ 2006; 139: 813-20 ။ [PubMed]
20 ။ ပြောင်းဖူးဆီကိုအစာကျွေးနေသော Liang NC၊ Hajnal A၊ Norgren R. Sham တို့ကကြွက်များတွင် dopamine ကိုတိုးပွားစေသည်။ နံနက် J ကို Physiol Regul Integr Comp Physiol ။ 2006; 291: R1236-9 [PubMed]
21 ။ Bello NT, Sweigart KL, Lakoski JM, Norgren R ကို, Hajnal အေကန့်သတ်ကြွက် dopamine ပို့ဆောင်ရေးတစ်ခု upregulation အတွက်စီစဉ်ထား sucrose access ကိုရလဒ်များကိုနှင့်အတူအစာကျွေး။ Integrated comp Physiol စည်းမျဉ်း J ကို Physiol ဖြစ်၏။ 2003; 284: R1260-8 ။ [PubMed]
22 ။ အဆိုပါ striatum အတွက် Bello NT, လူးကပ်စ LR, Hajnal အေထပ်ခါတစ်လဲလဲ sucrose access ကိုလွှမ်းမိုးမှု dopamine D2 အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆ။ Neuroreport ။ 2002; 13: 1575-8 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
23 ။ Berridge KC ။ အစားအစာဆုကိုနှစ်သက်ခြင်းနှင့်လိုချင်ခြင်း - အစာစားခြင်းမမှန်ခြင်း ဦး နှောက်အလွှာနှင့်အခန်းကဏ္။ ။ Physiol Behav ။ 2009; 97: 537-50 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
24 ။ Kelley AE, Bakshi VP, Haber SN, Steininger TL, Will MJ, ventral striatum အတွင်း၌အရသာ hedonics ၏ Zhang အမ် Opioid မော်ဂျူး။ Physiol Behav ။ 2002; 76: 365-77 [PubMed]
25 ။ Taha SA ။ ဦး စားပေးလား၊ အစားအစာစားသုံးမှုအပေါ် opioid အကျိုးသက်ရောက်မှုများပြန်လည်လည်ပတ်။ Physiol Behav ။ 2010; 100: 429-37 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
26 ။ Katsuura Y, Heckmann JA, Taha SA ။ နျူကလိယအတွက် mu-Opioid အဲဒီ receptor ဆွ palatability တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်နေရောင်ခြည် signal ကိုဖိနှိပ်ခြင်းဖြင့်ဖက်တီးအရသာစားသုံးမှုမြင့်တက်။ နံနက် J Physiol ။ 2011; 301: R244-54 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
27 ။ Smith ကမိသားစုဆရာဝန်။ ယောဟနျသ Davis ကနှင့်လျက်၏အဓိပ္ပါယ်များ။ အစာစားချင်စိတ်။ 2001; 36: 84-92 [PubMed]
28 ။ Warwick ZS ။ အစားအသောက်အဆီပမာဏသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ကြွက်များတွင်အလိုအလျောက်ကယ်လိုရီစားသုံးမှုကိုတိုးပွားစေသည်။ Obes Res ။ 2003; 11: 859-64 [PubMed]
29 ။ Warwick ZS, McGuire CM, Bowen KJ, Synowski SJ အဆီဓာတ်မြင့်မားသောအစားအစာ hyperphagia ၏အမူအကျင့်ဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများ - အစားအစာအရွယ်အစားနှင့်အလွန်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှု။ အမေရိကန် J ကို Physiol Reg Integ Comp Physiol ။ 2000; 278: R196-200 [PubMed]
30 ။ ကင် HJ, Norgren R. အဆိုပါအရသာဓာတ်ပြုမှုစမ်းသပ်မှု။ အာရုံကြောပုံမှန်ကြွက်များတွင် gustatory လှုံ့ဆော်မှုမှဗြဲ Mimetic တုံ့ပြန်မှု။ Brain Res ။ 1978; 143: 263-79 [PubMed]
31 ။ ဆုလာဘ်အစွမ်းသတ္တိ၏တစ်ဦးအတိုင်းအတာအဖြစ် Hodos ဒဗလျူတိုးတက်ရေးပါတီအချိုးအစား။ သိပ္ပံ။ 1961; 134: 943-4 ။ [PubMed]
32 ။ တိုးတက်သောအချိုးစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်တိုးမြှင့်အရွယ်အစားနှင့်အားဖြည့်ပမာဏ၏ Hodos W, Kalman G. အအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ J ကို Exp စအို Behav ။ 1963; 6: 387-92 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
33 ။ Stewart က WJ ။ တိုးတက်သောအားဖြည့်အစီအစဉ်များ - ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်း။ Aust J ကို Psychol ။ 1975; 27: 9-22
34. Davis က JD, Smith ကမိသားစုဆရာဝန်။ အစာကျွေးခြင်းမှအတုအယောင်သင်ယူခြင်း - ဇီဝကမ္မ postingestional လှုံ့ဆော်မှုများဆုံးရှုံးခြင်းသို့အမူအကျင့်ဆိုင်ရာညှိနှိုင်းခြင်း။ ဇီဝကမ္မဗေဒ၏အမေရိကန်ဂျာနယ် - စည်းမျဉ်း, ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ဇီဝကမ္မဗေဒ။ 1990; 259: R1228-R35 ။ [PubMed]
35 ။ Bocarsly ME, Berners LA က, Hoebel BG, Avena မိုင်။ အာဟာရ-တိကျတဲ့အစားအသောက်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေများအတွက်ဂယက်: မူးရူးအဆီကြွယ်ဝသောအစားအစာကိုစားသောကြွက် opiate ကဲ့သို့ရုပ်သိမ်းရေးနှင့်ဆက်စပ် somatic ဆိုင်းဘုတ်များသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုမပြကြဘူး။ Physiol ပြုမူနေ။ 2011; 104: 865-72 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
36 ။ Davis က JD, ဖာရက် MC ။ အစားအစာဆင်းရဲချို့တဲ့ခြင်းနှင့်အစာအာဟာရဖြစ်စေသည့်အပြုအမူဆိုင်ရာအပြုအမူများ၌အာဟာရပြည့် ၀ စွာပြောင်းလဲခြင်း။ နံနက် J Physiol ။ 1993; 264: R97-103 [PubMed]
37 ။ Spector AC၊ Klumpp PA၊ Kaplan JM ။ ကြွက်များတွင်အပြုအမူကိုလျက်နေခြင်း၏အဏုဇီဝတည်ဆောက်မှုအပေါ်အစာအာဟာရချို့တဲ့ခြင်း၊ Behav Neurosci ။ 1998; 112: 678-94 [PubMed]
38 ။ Baird JP, St John SJ, Nguyen EA ။ အေးဆေးတည်ငြိမ်သောအရသာကိုမနှစ်သက်သည့်အပြောင်းအလဲ၏ယာယီနှင့်အရည်အသွေးဆိုင်ရာဒိုင်းနမစ် - ပေါင်းစပ်ထားသည့်ယေဘုယျစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်ယန္တရားကိုဆန်းစစ်ခြင်း။ Behav Neurosci ။ 2005; 119: 983-1003 [PubMed]
39 ။ ဝါဂွမ်း P ကို, Sabino V ကို, Steardo L ကို, Zorrilla EP ။ အလွန်အမင်းနှစ်သက်အစားအစာမှကန့်သတ် access ကိုအတူကြွက်များတွင် Opioid-မှီခို anticipatory အနုတ်လက္ခဏာ contrast နဲ့မူးရူးကဲ့သို့စား။ Neuropsychopharmacology ။ 2008; 33: 524-35 ။ [PubMed]
40 ။ Wojnicki FH, Stine JG, Corwin RL ။ ကြွက်များတွင်အရည် sucrose Bing အားသုံးအချိန်ဇယား, အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ဖြန့်ဝေမှုစနစ်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ Physiol ပြုမူနေ။ 2007; 92: 566-74 ။ [PubMed]
41 ။ Boggiano MM, Artiga AI, Pritchett CE, Chandler-Laney PC, Smith ML, Eldridge AJ ။ အရသာရှိသောအစားအစာများစွာစားသုံးခြင်းသည်အဝလွန်ခြင်းကိုလွယ်ကူစွာထိခိုက်လွယ်ခြင်းနှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲအစာစားခြင်းကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည်။ int J ကို Obes (Lond) 2007; 31: 1357-67 [PubMed]
42 ။ Rao က RE, Wojnicki FH, Coupland J ကို, Ghosh က S, Corwin RL ။ Baclofen, raclopride နှင့် naltrexone differential ကန့်သတ်လက်လှမ်းအခြေအနေများအောက်တွင်အစိုင်အခဲအဆီ emulsion စားသုံးမှုလျှော့ချပေးပါတယ်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2008; 89: 581-90 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
43 ။ R ဖွံ့ဖြိုးရေး Core အဖွဲ့။ R: စာရင်းအင်းတွက်ချက်မှုအတွက်ဘာသာစကားနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်။ ဗီယင်နာ၊ သြစတြီးယား - စာရင်းအင်းတွက်ချက်ခြင်းဆိုင်ရာ R ဖောင်ဒေးရှင်း၊ 2012 ။
44 ။ Taha SA၊ Katsuura Y၊ Noorvash D၊ Seroussi A၊ Field HL ။ convergence မဟုတ် serial, striatal နှင့် pallidal ဆားကစ် opioid- သွေးဆောင်အစားအစာစားသုံးမှုကိုထိန်းညှိ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2009; 161: 718-33 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
45 ။ Engelberg MJ, Gauvin L, Steiger H. အစားအသောက်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း၊ အရက်သောက်ရန်တိုက်တွန်းခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်မူးယစ်ဆေးဝါးအကြားဆက်စပ်မှုကိုသဘာဝအတိုင်းအကဲဖြတ်ခြင်း - ရှင်းလင်းချက်။ အစာစားခြင်းဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာဂျာနယ်။ 2005; 38: 355-60 [PubMed]
46 ။ Fedoroff IDC, Polivy J, Herman CP ။ ကန့်သတ်ခြင်းနှင့်အကန့်အသတ်မရှိသောစားသုံးသူများ၏အပြုအမူအပေါ်အစာအာဟာရဆိုင်ရာကြိုတင်ထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ အစာစားချင်စိတ်။ 1997; 28: 33-47 [PubMed]
47 ။ Bartholome LT၊ Raymond NC၊ Lee အက်စ်အက်စ်၊ ပီတာဆန် CB၊ Warren CS ။ အရက်အလွန်အကျွံမစားသောရောဂါရှိသည့်အဝလွန်အမျိုးသမီးများအတွက်အသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း - အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းနည်းလမ်းများစွာကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ Int J ကို Disord စားပါ။ 2006; 39: 685-93 [PubMed]
48 ။ Guss JL, Kissileff HR, Devlin MJ, Zimmerli E, Walsh BT ။ အရက်အလွန်အကျွံစားသောရောဂါရှိသည့်အမျိုးသမီးများသည်ခန္ဓာကိုယ်ထုထည်ညွှန်းကိန်းများနှင့်အတူအရက်သောက်ခြင်းအရွယ်အစားတိုးလာသည်။ Obes Res ။ 2002; 10: 1021-9 [PubMed]
49. Kales EF ။ bulimia အတွက်မူးရူးစား၏ Macronutrient ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဇီဝကမ္မဗေဒ & အပြုအမူ။ 1990; 48: 837-40 ။ [PubMed]
50. Bello NT, Patinkin ZW, Moran TH ။ အစားအစာ - သွေးဆောင်မူးရူးစား၏ opioidergic အကျိုးဆက်များ။ ဇီဝကမ္မဗေဒ & အပြုအမူ။ 2011; 104: 98-104 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
51. Castonguay TW, Burdick SL, Guzman MA, Collier GH, Stern JS ။ Self-selection နှင့်အဝလွန် Zucker ကြွက် - အစားအသောက်အဆီများရောစပ်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဇီဝကမ္မဗေဒ & အပြုအမူ။ 1984; 33: 119-26 ။ [PubMed]
ကြွက်များတွင် 52 လူးကပ်စက F, Ackroff K ကို, Sclafani အေအစားအသောက်အဆီ - သွေးဆောင် hyperphagia အဆီအမျိုးအစားနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံစံတစ်ခု function ကို။ ဇီဝကမ္မဗေဒ & အပြုအမူ။ 1989; 45: 937-46 ။ [PubMed]
53 ။ Lucas F, Sclafani A. Hyperphagia သည်အဆီနှင့်သကြားအရောအနှောမှထုတ်လုပ်သည့်ကြွက်များတွင်ဖြစ်သည်။ Physiol Behav ။ 1990; 47: 51-5 [PubMed]
54 ။ Lucas F၊ Ackroff K၊ Sclafani အေ။ အဆီများသောအစားအသောက်များကိုကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းနှင့်ကြွက်များတွင်ပိုတက်စ်တင်းအချက်များဖြင့်ကမကထပြုမှုပြုခြင်း။ နံနက် J Physiol ။ 1998; 275: R1511-22 [PubMed]
55 ။ Synowski SJ, Smart AB, Warwick ZS ပြင်ပမှထွက်လာသည့်တစ်ခုတည်းသောအစားအစာစမ်းသပ်မှုများနှင့်ကြွက်များတွင်ရေရှည်အလိုအလျောက်အစာကျွေးခြင်းများတွင်အဆီပမာဏမြင့်မားသောအစာစားသုံးမှုပမာဏသည်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်အစာထက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောပမာဏပိုမိုကြီးမားသည်။ အစာစားချင်စိတ်။ 2005; 45: 191-4 [PubMed]
56 ။ Warwick ZS, Synowski SJ, ဘဲလ် KR ။ အာဟာရဓာတ်ပါဝင်မှုသည်ကြွက်များတွင်အစားအစာကယ်လိုရီသိပ်သည်းဆနှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်တိုးစေသည်။ Physiol Behav ။ 2002; 77: 85-90 [PubMed]
57 ။ Warwick ZS, Synowski SJ, Rice KD, Smart AB ။ ကြွက်များတွင်နေ့စဉ်စားသုံးမှုနှင့်အစားအသောက်တို့၏အာဟာရပြည့်ဝမှုနှင့်အဆီပါဝင်မှုတို့၏လွတ်လပ်သောသက်ရောက်မှုများ။ Physiol Behav ။ 2003; 80: 253-8 [PubMed]
58 ။ Warwick ZS၊ Weingarten HP ။ High- အဆီအစားအသောက်များတွင် hyperphagia ၏ဆုံးဖွတျ: orosensory နှင့် postingestive အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏စမ်းသပ်ခွဲစိတ်။ နံနက် J Physiol ။ 1995; 269: R30-7 [PubMed]
59 ။ Avena မိုင်, Rada P ကို, Hoebel BG ။ သကြားနဲ့အဆီ Bing စွဲလမ်းကဲ့သို့သောအပြုအမူအတွက်ကွာခြားမှုရှိသည်။ J ကို Nutr ။ 2009; 139: 623-8 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
60 ။ Buda-Levin A၊ Wojnicki FH, Corwin RL ။ Baclofen သည်အရက်အလွန်အကျွံသောက်သည့်အခြေအနေတွင်အဆီစားသုံးမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ Physiol Behav ။ 2005; 86: 176-84 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
61 ။ Corwin RL, Wojnicki FH ။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အတိုကောက်ကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာအသုံးပြုနိုင်သည့်ကြွက်များတွင်အရက်အလွန်အကျွံစားခြင်း။ Curr Protoc Neurosci ။ 2006၊ အခန်း9(Unit9 23B) [PubMed]
62 ။ Wojnicki FH, ချာနီ Charny က, G, Corwin RL ။ Trans-အဆီ-အခမဲ့အတိုကောက်စားသုံးကြွက်များတွင် Bing-type အမျိုးအစားအပြုအမူ။ Physiol ပြုမူနေ။ 2008; 94: 627-9 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
63 ။ Corwin RL, Wojnicki FH ။ Baclofen, raclopride နှင့် naltrexone differential ကန့်သတ်လက်လှမ်းအခြေအနေများအောက်တွင်ဆီဥနှင့် sucrose ၏စားသုံးမှုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ပြုမူနေ Pharmacol ။ 2009; 20: 537-48 ။ [PubMed]
64 ။ Davis က JD, Smith ကမိသားစုဆရာဝန်။ maltose နှင့် sucrose solution များကိုစားသုံးနေသောကြွက်များ၏စည်းချက်ညီသောလျှာဖြင့်လှုပ်ရှားမှု၏ microstructure ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။ Behav Neurosci ။ 1992; 106: 217-28 [PubMed]
65 ။ Weingarten HP က။ မုန့်ညက်စတင်အတွက်သင်ယူမှုများအတွက်အခန်းကဏ္ဍ: အေးစက်တွေကို sated ကြွက်များတွင်အစာကျွေးထုတ်ယူ။ သိပ္ပံ။ 1983; 220: 431-3 ။ [PubMed]
66 ။ Ikemoto S က, Panksepp ဂျေနျူကလိယ၏အခန်းကဏ္ဍလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူအတွက် dopamine accumbens: အထူးရည်ညွှန်းအတူစညျးလုံးအနက်ကိုဆုချစားမှုရန်။ ဦးနှောက် Res ဦးနှောက် Res ဗျာ 1999; 31: 6-41 ။ [PubMed]
67 ။ နီကိုလာ SM အဆိုပါပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ချဉ်းကပ်မှုအယူအဆ: အားထုတ်မှု၏ပေါင်းစည်းမှုနှင့်နျူကလိယ၏အခန်းကဏ္ueကိုများအတွက် cue- တုံ့ပြန်ယူဆချက်ဆုလာဘ် - ရှာဖွေအပြုအမူ၏ activation အတွက် dopamine accumbens ။ J ကို Neurosci ။ 2010; 30: 16585-600 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
68 ။ ပါကင်ဆန်ဂျေအေ၊ Olmstead MC, Burns LH, Robbins TW, Everitt BJ နျူကလိယကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက် Dissociation appetitive pavlovian ချဉ်းကပ်မှုအပြုအမူနှင့် D-amphetamine အားဖြင့်အေးစက်အားဖြည့်ခြင်းနှင့် locomotor လှုပ်ရှားမှုများ၏အလားအလာအပေါ် core နဲ့ shell ကို accumbens ။ J ကို Neurosci ။ 1999; 19: 2401-11 [PubMed]
69 ။ Yun IA, Wakabayashi KT, Fields HL, Nicola SM ။ အဆိုပါအမူအကျင့်များအတွက် ventral tegmental areaရိယာနှင့်နျူကလိယမက်လုံးပေးတွေကိုမှအာရုံခံပစ်ခတ်မှုတုံ့ပြန်မှု accumbens ။ J ကို Neurosci ။ 2004; 24: 2923-33 [PubMed]
70 ။ Wojnicki FH, Babbs RK, Corwin RL ။ တုံ့ပြန်တိုးတက်သောအချိုးအစားအားဖြင့်အကဲဖြတ်အဖြစ်, အဆီထိရောက်မှုအားဖြည့်ကျွမ်းလောင်ရရှိနိုင်မရငွေပမာဏကိုအပေါ်သို့မူတည်ပါတယ်။ Physiol ပြုမူနေ။ 2010; 100: 316-21 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
71 ။ Bari AA, ပီယပ် RC ။ D1 ကဲ့သို့သောနှင့် D2 dopamine receptor antagonists များသည်ကြွက်၏နျူကလိယ၏အခွံဒေသခွဲတွင်ကိုကင်းကိုလျော့နည်းစေသည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2005; 135: 959-68 [PubMed]
72. Kelley AE, Baldo BA၊ Pratt WE၊ Will MJ ။ Corticostriatal-hypothalamic တိုက်နယ်နှင့်အစားအစာလှုံ့ဆျောမှု: စွမ်းအင်, လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်ဆုလာဘ်၏ပေါင်းစည်းမှု။ ဇီဝကမ္မဗေဒ & အပြုအမူ။ 2005; 86: 773-95 ။ [PubMed]
73 ။ Smith က KS, Tindell AJ, Aldridge JW, Berridge KC ။ ဆုလာဘ်နှင့်လှုံ့ဆျောမှုအတွက် Ventral pallidum အခန်းကဏ္။ ။ အမူအကျင့် ဦး နှောက်သုတေသန။ 2009; 196: 155-67 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
74 ။ ဆုနှင့်စားခြင်းအတွက်အရသာ၏အခန်းကဏ္ of ၏ Yamamoto T. ဗဟိုယန္တရားများ။ Acta Physiologica Hungarica ။ 2008; 95: 165-86 [PubMed]
75 ။ Bakshi VP, Kelley AE ။ optrate receptor မျိုးကွဲများ၏အခန်းကဏ္:ကို: အ ventral striatum ၏ opioid ဆွခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်နို့တိုက်ကျွေးရေး။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1993; 265: 1253-60 [PubMed]
76 ။ Taha SA၊ Norsted E၊ Lee LS, Lang PD, Lee BS, Woolley JD, et al ။ Endogenous opioids ဆွေမျိုးအရသာ ဦး စားပေး encode ။ Eur J ကို Neurosci ။ 2006; 24: 1220-6 [PubMed]
77 ။ Zhang က M, Gosnell BA, Kelley AE ။ high-fat အစာကိုစားသုံးခြင်းသည်နျူကလိယ accumbens အတွင်း mu opioid receptor ကိုနှိုးဆွပေးခြင်းဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1998; 285: 908-14 [PubMed]
78 ။ Zhang က M, Kelley AE ။ နျူကလိယနျူကလိပ်ထဲသို့ microinjected Opiate agonists သည်ကြွက်များတွင် sucrose drink ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ Psychopharmacology (Berl) 1997; 132: 350-60 [PubMed]
79 ။ Shin AC, Townsend RL, Patterson LM, Berthoud HR ။ အဆီဓာတ်များစွာပါဝင်သောအဝလွန်ခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း၊ လက်ပ်နင်းနှင့်မျိုးရိုးဗီဇအရခန့်မှန်းခြေအရအချိုဓာတ်နှင့်အဆီထွက်သောအစားအစာလှုံ့ဆော်မှုကို“ နှစ်သက်” ခြင်းနှင့်“ လိုခြင်း” တို့ဖြစ်သည်။ နံနက် J ကို Physiol Regul Integr Comp Physiol ။ 2011; 301: R1267-80 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
80 ။ Furnes M, Zhao CM, Chen D. အဝလွန်ခြင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်တစ်နေ့လျှင်အစားတစ်နေ့လျှင်ကယ်လိုရီပိုမိုများပြားလာခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ကြွက်များတွင်အဆီများသောအစားအသောက်များပါဝင်သောအဝလွန်ခြင်းကိုလေ့လာခြင်း။ အဝလွန်ခြင်းခွဲစိတ်ကုသခြင်း 2009; 19: 1430-8 [PubMed]
81 ။ ဂျွန်ဆင် AW အစားအသောက်ခြယ်လှယ်မှုသည်အစားအသောက်များတွင်ပါ ၀ င်သည့်အဝလွန်ကြွက်များတွင် sucrose လက်ခံမှုကိုလွှမ်းမိုးသည်။ အစာစားချင်စိတ်။ 2012; 58: 215-21 [PubMed]
82 ။ Marco A၊ Schroeder M, Weller A. ။ OLETF ကြွက်များတွင်နို့နှင့်နို့စို့အရွယ်မှအရွယ်ရောက်သည့်အထိအာဟာရရှိသောစားသုံးမှုစားသုံးမှု၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပုံစံ။ Behav Neurosci ။ 2009; 123: 1251-60 [PubMed]
83. Zimmerli EJ, Devlin MJ, Kissileff HR, Walsh BT bulimia nervosa အတွက် satiation ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။ ဇီဝကမ္မဗေဒ & အပြုအမူ။ 2010; 100 ကို: 346-9 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]